ဆားပုလငျးမွမောငျနှငျ့ဆယျဂျေါလီတုတျကွီး – My Blog
ကိုမွမောငျတယောကျ မငျးကွီးဆမွူရယျကို မွနေိုးအဖွူကောငျ ယီးပဲကှာ..ဟုဆဲဆိုမိ၍..ရနျကုနျတာမှဂေတျမှာ..တာဝနျကနြရော မှ..သာယာဝတီနယျသို့ ပွောငျးရှခေံ့လိုကျရသညျ.. ဖွဈပုံကဒီလို..ကိုမွမောငျ စနေ တနငျးဂှေ ဆိုရငျ အလုပျပိတျသဖွငျ့တာမှေး ဈေးအနီး.. ဖာဂေါငျးထှနျးကွညျအိမျမှာအခြိနျဖွုနျးတတျသညျ..ဖာဂေါငျးထှနျးကွညျမှာ ကိုမွမောငျ၏ ဆကျသား(spy). .ယခု ခတျေအချေါ..ထောကျလှနျးသတငျးပေးသူဖွဈပသေညျ.. ထိုအပါတျက ထှနျးကွညျထံမှခဲခွဈစာတခုရရှိသညျ.. စာထဲတှငျ.. ကို မွမောငျခမြား..အညာထနျးသီးအသဈတှရေမယျလာယူပါဟု..ရထေားသညျ …ကိုမွမောငျ ထိုစာကွောငျ့ အရမျးပြျောသှားလေ သညျ… အညာထနျးသီးဆိုသညျမှာ..အညာသူဖာအသဈရောကျရှိသညျ..လာဘှတျပါဟု.. အဓိပ်ပါယျရလသေညျ…
ဖာကောငျးထှနျးကွညျသညျ..အသဈရောကျတိုငျး..ကိုမွမောငျကိုအရငျကြှေးပီးမှ.. အရာရှိမြား သထေးမြားဆီသို့တဆငျ့ဈေးကှကျ တငျသူ.ဖွဈသညျ… ..ထို့ကွောငျ့ထှနျးကွညျအိမျသို့အစောကွီးရောကျနလေသေညျ.. “ဆရာသမားရေ အခနျးထဲမှာ ထနျးသီးရှိ တယျဝငျစားပတေော့.. စားပီးရငျ အမောဖွဖှောဖို့ ငါးသုံးလုံးစီးကရကျလေးလဲ အသငျ့ပါဗြ.” ထှနျးကွညျ မှာစရာရှိမှာပီးအပွငျ ထှကျသှားလသေညျ.. ကိုမွမောငျ သညျ ခနျးစညျး အဖွူလေးကာထားသော ဆယျပေးပတျလညျအခနျးလေးထဲဝငျသှားသညျ… နကျမှောငျနသေောဆံကသောကို ဖွလြေော့ထားပီး သူ့ကိုကြောပေးကာထိုငျနသေော လုံးကွီးပေါကျလှ အမြိုးသမီးငယျလေးကို တှလေို့ကျရသညျ. မွမောငျမှာ စုံထောကျ နယျထိနျးဖွဈ၍ အနားသို့ခကျြခငျြးမကပျပဲ..
“ရှကေ့ ညမလေး ဒီဘကျလှညျ့ပါလား ကျောရီး ကွညျ့ခငျြလို့ပါ” “ရှငျက အငျမတနျ စစေ့ပျသားပဲ.. အနားကပျမလာပဲ အဝေးက လှမျးမေးနတေယျ.. သတိဆိုတာပိုတာမရှိဘူးဆိုတာ.. ရှငျနဲ့တှမှေ့ယုံတော့တယျ” မိနျးခလေးမှာ မွမောငျဘကျလှညျ့လသေညျ.. ရှနျးလဲ့သောမကျြဝနျးနှငျ့အတူ ရှအေိုရောငျလိုမှုနျးတဲ့အသား.. လညျတိုငျကြော့ရှငျးလှပပီး… ဇာအငျးကြီးလဝေတျထား သဖွငျ့.. အနကျရောငျဘျောလီဝတျထားတာမွငျရသလို..ရငျသားနှဈဆိုငျမှာပွညျ့တငျးစှာ လြှံ့ထှကျနလေသေညျ..နှာတံ သှယျ၍နှုတျခမျးလေးမြား နှငျဆီဖူးသဖှယျ စိုအိနလေသေညျ.. မွနျမာဆနျဆနျမိနျးမထိုငျ ခွသေလုံးကှေးလေးထိုငျနသေဖွငျ့ တငျသားဆိုငျက ကော့ထှကျနလေသေညျ.. “ကမြနာမညျ ခငျခငျလေးပါ..ကမြအဖကေရနေံခြောငျးကဆနျစကျသထေး ဦးဘ ကလေး ပေါ့” “အိုး..မိုငျဂေါ့..သထေးသမီးပဲဘာလို့ထှနျးကွညျဆီရောကျရသလညျးဗြ..ဒါကဖာခတြဲ့နရောလေ..မခငျလေးနဲ့မ သငျ့တျောဘူး”
“ကမြ သိပါတယျကိုမွမောငျ..ကမြအဖကေ.. ရာထူးဥစ်စာ အရမျးမကျပီး..ကမြကို.. အဖွူကောငျ နဲ့ပေးစားမလို့လုပျနလေို့. ထှကျလါတာပါ..ကမြ အပြိုရညျကို.. အလကားမဖွဈစရေဘူး..ဒါကွောငျ့ ရှငျ့လိုနိုငျငံကြျောစုံထောကျဆီမှာအရငျခံပီးမှ အဲ့အဖွူ ကောငျကိုယူမှာပါ..” မွမောငျ ဘဝငျမွငျ့ တတျသူမဟုတျပါတညျတညျငွိမျနှငျ့.. “အဲ့တော့ ရနျကုနျကိုအလညျသှားမယျလို့ညာပီး ကြုပျဆီလာတှတေ့ယျဆိုပါတော့” “အမှနျပါပဲ..ရှငျနဲ့အတူအိပျပီး ကိုယျဝနျဆောငျမယျ..ရှငျ့သှေးသားကိုလိုခငျြလို့ပါ” “ဟုတျပါပီ အမိ စကွရအောငျ..” မွမောငျ လကျမွနျသူဖွဈ၍ သူ၏ ဘောငျးဘီရှညျနှငျ့ ကုတျအငျးကြီကိုခြှတျခလြိုကျသညျ.. ၈ လကျမခနျ့ လီးကွီးမှာတညျတညျငွိမျငွိမျဖွငျ့ပေါငျနှဈခုကွားတှဲလဲခိုနသေညျ.. မခငျလေးမှာ မတျတပျရပျနသေော မွမောငျ အရှရေ့ောကျလာ ပီး ဒူးထောကျထိုငျကာ လီးကို လကျနှဈဖကျနှငျ့ဆုတျကိုငျပီး ဒဈထိပျကို စတငျ၍ စုပျလိုကျသညျ..
ထိုခတျေအခါက ပုလှပေေးတာ လူတိုငျးမသိပေ..ခငျခငျလေးမှစတငျ၍ ပွုလုပျသဖွငျ့ ခတျေအဆကျဆကျဖာမြား လကျဆငျ့ကမျးကာ အိမျထောငျသညျမြားအထိ ပွနျ့ပှားလာခဲ့သညျ.(နောကျအပါတျတှငျ ပုလှမေယျတျော ခငျခငျလေး အကွောငျး တငျဆကျမညျဖွဈ၍..#ရှကွောမွိုငျ ပေ့ ကို like follow လေးလုပျထားဖို့မမကွေ့နဲ့နျော). . ကိုမွမောငျ လီးစုပျမခံဖူးပေ အလိုးသကျတမျးကွာမွငျ့ခဲ့ပမေဲ့ယခုမှအစုပျခံ အမှုတျခံရဖူးသညျ.. ကောငျးလစှေ..ခငျလေးမှာ အငျမတနျညငျသာလှပသေညျ.. လီးကိုစုပျနရေငျး လဥမြားကို ဖှဖှလေးနှိပျနယျ ပေးပွနျသညျ.. ထို့နောကျလဥမှတဆငျ့လီးအောကျခွေ အကွောကို လြှာနဲ့ပှတျဆှဲလသေညျ.. ထိုအတိုငျးဆို သုတျပမျးထှကျနိုငျ တာ.. ကိုမွမောငျရိပျမိလိုကျသညျ..
“မခငျလေး ရပျပါတော့ ကြုပျသုတျရညျတှအေလကားမဖွဈခငျြဘူး လိုးသငျ့ပီလေ” “အကို့သဘောပါရှငျ ကမြပကျလကျလှနျရမ လား..” “အငျး မခငျလေးက ပထမဆုံးအကွိမျအလိုးခံမှာဆိုတော့ ရိုးရိုးပဲလိုးကွမယျ တခြီပီးမှပုံစံပွောငျးကွမယျ” အဝတျအစား မြားခြှတျ၍ မခငျလေး ခလေးမှေးခါနီးမိနျးမမြားလို ပေါငျကားပေးလိုကျသညျ.. ရှောကျသီးလုံးအရှယျနို့သားကွီးမြားမှာကိုငျရကျ စရာမရှိအောငျလှပလှနျးသညျ အနကျစောကျမှေးမြားမှာ ဆီးခုံအလယျမှစ၍ အပျေါသို့ ညီညာစှာ ထောငျနလေသေညျ..(ပနျ့ကေ ပုံစံဖွဈသညျ). .အဖုတျနှုတျခမျးသားမြားမှာ.. စိနသေညျ..တရုတျမမြားလကျတိုဝတျပွီးလကျတှဲလောငျးခလြငျြ သငျကွညျ့ကွညျ့ပါ ဖှေးဖှေးစိနပေီး V ရှိတျပုံစံဖွဈသညျ.. ကိုမွမောငျ လီးတဝကျကိုကိုငျ၍ အဖုတျဝကို ဖိခလြိုကျသညျ မဝငျနိုငျပါ အပြို အစဈမို့တငျးခံနသေညျ..
“မခငျလေး လကျနဲ့အဖုတျကိုဖွဲပေးထားပါ အပေါကျက အရမျးသေးနတေယျ” မခငျလေး လကျခြောငျးမြားဖွငျ့ဖွဲပေးသောအခါ လကျညိုးဝငျရုံအပေါကျလေးပျေါလာသညျ.. ကိုမွမောငျ တံထှေးကိုလီးမှာ သုတျလိုကျပီး အားပိုသုံးကာထိုးသှငျးလိုကျသညျ.. ဗွိ..ဗွဈ..အိ..အီး… ဒဈဝငျသှားသညျ..တံတှေးကို လီးမှာထပျသုတျလိုကျရာ..ဒုတျ..အ.. ဝငျသှားပီ မခငျလေး လိုးမယျနျော နာ ရငျအောငျ့ခံပါ.. “ကမြခံနိုငျတယျကိုမွမောငျစိတျရှိသလိုလိုးပါ” အငျမတနျပွတျသားသောမိနျးမဖွဈပသေညျ.. လီးကွီးနှငျ့ ပါ ကငျဖောကျခံရနသေျောလညျးလုံးဝမအျောပေ.. လှကွေီးထိုး လိုးပေးလိုကျရာ သုတျရညျမြား သားအိမျထဲဝငျသှားလသေညျ.. မ ခငျလေးဗိုကျအတှငျးမှ ခပျနှေးနှေးအရသာကို ခံစားလိုကျရသညျ.. ကောငျးလိုကျတာ ကိုမွမောငျထပျလိုးပါ.. “ကုနျးလိုကျပါ မခငျ လေး”
ဝငျးအိနသေောတငျသားဆိုငျမြားကိုဆုတျကိုငျပီး အနောကျမှဆကျတိုကျလိုးလိုကျရာ အရညျမြားဆကျတိုကျထှကျ၍ မခငျလေးပီး လသေညျ… ..ထိုစဉျ…”ဆရာသမားရေ..” ထှနျးကွညျအသံကယျြကွီးကွားလိုကျရသညျ.. “ဘာလဲဟ..အလနျ့တကွားနဲ့..” “မငျးကွီး ဆမွူရယျက ဆရာသမားကို အရေးတကွီး ရှာနတေယျဗြ လူသတျမှုဖွဈလို့တဲ့” ထိုအခါမခငျလေးက တခကျြပွုံးလိုကျ ပီး “ကိုမွမောငျ ကမြတို့ထပျတှကွေ့မှာပါ.. ရှငျလဲအလုပျပျေါလာပီပဲ..သှားလိုကျလေ ကမြစောငျ့နပေ့မယျ” လီးရှိနျက ခုထိမ သသေေးပေ..လိုးလို့ကောငျးနကောမှ..ဒီမွနေိုး လာနှောကျယှကျနတေယျ.. “အေး..ငါအခုလာခဲ့မယျ လို့သတငျးပို့လိုကျ”. .. မွ မောငျ မခငျလေးကို နှုတျဆကျလိုကျပီးတာမှဂေါတျ မငျးကွီးဆမွူရယျဆီ ထှကျသှားလသေညျ… ဂါတျတဲသို့ရောကျသောအခါ.. လကျအောကျငယျသားမြားကို..
အငျးဂလိပျ မွနျမာလိုဆဲဆိုနသေော ဆမွူရယျကိုတှလေို့ကျရသညျ.. ကိုမွမောငျ တငျးပီးဝငျသှားလိုကျသညျ.. “ဟာ လူကလေး မွမောငျ ဘယျတှသှေားနတောလညျး..ကြုပျခဗြားကိုလိုအပျနတေယျ”. . “ကြုပျဟာကြုပျ ဘယျသှားသှားခမြားစောကျပူပါလား.. အခုပိတျရကျ ခဗြားနားမလညျဘူးလား.” “ပွနျမအျောနဲ့လူကလေး မငျးနယျရောကျသှားမယျ နားလညျလား” ထိုအခါ ဆာပုလငျး မွမောငျ က အငျမတနျပီသသော အငျးဂလိပျအသံဖွငျ့. ….”ငိုးမ…မွနေိုး..လီးပဲလေ”. .ဟုပွနျဆဲလိုကျရာ..မငျးကွီးမကျြနှာနီရဲသှား ပီး… …”မငျးအခု ခကျြခငျြး သာယာဝတီကိုပွောငျးစေ”. ဟုအမိနျ့ခလြသေညျ ကိုမွမောငျ၏နာမညျကြျောကွားမှုကွောငျ့သာယာဝ တီနယျမှလူဆိုးသခိုးမြားကွကျပြောကျငှကျပြောကျ ငွိမျသကျသှားသညျ.
ထို့ကွောငျ့သူလဲအားယားနပေီး.. အကွမျးရလေေးသောကျ ဂှငျးထုလိုကျနှငျ့သာယာနလေသေညျ.. …တနမေ့နကျ ကိုမွမောငျထံ စာတစောငျရောကျလာသညျ…ထိုစာမှာ.. မငျးကွီး ဆမွူရယျမှာအမကျြတျောပွေ၍ တာမှဂေါတျသို့ပွနျလာရနျချေါစာဖွဈသညျ.. ….ကိုမွမောငျသိပါသညျ..သူရနျကုနျမှာမရှိလငျြ..မွနေိုးလူဆိုးမြားထကွှနကွေမှအမှနျပငျ…ထို့ကွောငျ့ရနျကုနျ့သို့ လှညျ့ရပါ တော့သညျ… …….. …..ဗဟနျး ရတောရှညျလမျး ရတနာပှဲစား ဒျေါမွမွ အိမျရှတှေ့ငျ သတငျးထောကျမြားစုရုံးရောကျရှိနကွေ သညျ..ပုလိပျ မြားက ခွံတခါးဝ မှာစောငျ့ကွပျနကွေသညျ.. မဟူရာရောငျဆေးခွယျထားသောထိုအိမျမှာကွီးမားလှပသေညျ.. အပျေါထပျအောကျထပျပွဿဒျကနုတျမြားပွုလုပျထား၍အိမျရှငျဒျေါမွမှာလူကုနျထနျတဦးမှနျးသိသာလသေညျ.. ..အိမျရှေ့ဧဲ့ခနျး ကယျြမှာ ဒရိုကျဘာ မဲကွီးနှငျ့ အိမျဖျော ဖွူတုတျ တို့ကို.. ပုလိပျ စိနျဝငျး က စဈဆေးမေးမွနျးနလေသေညျ..
“”မငျး ညနကေ ဘယျရောကျနလေညျး” မဲကွီးမှာ ကွောကျဒူးတုနျပီး.. “ဒျေါမွက ကွကျလြှာစှနျးဒံပေါကျစားခငျြတယျသှားဝယျ ပါ ခိုငျးလို့ သှားနတောပါ”. . “ဟုတျပီ..ဟဲ့ဖွူတုတျ နငျကရောဘာလုပျနလေဲ..” အိမျဖျောဖွူတုတျမှာ မကျြနှာငယျလေးနှငျ့ “ကမြ အခနျးထဲမှာ အိပျနတောပါ.. ဒျေါမွအျောသံကွားလို့ သူ့အခနျးကိုသှားဖှငျ့ကွညျ့တာပါ.. အဲ့ခြိနျမှာ ဒျေါမွသနေတောပါ… အီး..ဟီး..ဟီ.”. . “မဲကွီး..ဒံပေါကျဝယျတယျမဟုလား.. ဘယျမှာလညျး ဒံပေါကျ” မဲကွီး ကွောကျလနျ့မှုက အထှတျအထိပျ ရောကျလပေီ.. “ကနြျောပိုကျဆံအိတျယူဖို့မလေို့ပွနျလှညျ့လာတာပါ ကနြျောမသတျပါဘူးဗြ.. အီး..ဟီး..” မဲကွီးငိုခလြသေညျ..
“တိတျဇမျး..ပုလိပျတှေ အဲ့ကောငျ့ကိုဖမျးလိုကျတော့ ဒီကောငျသတျတာ” “ဖွူတုတျ င့ကိုကယျပါအူးဟ” ဖွူတုတျလဲဘာမှ မတတျနိုငျငိုကွှေးတော့သညျ…မဲကွီးလကျထိပျခတျထားခံရစဉျမှာ… …ကောငျးဘှိုငျဦးထုပျကိုဆောငျးထား၍ ကုတျအငျးကြီးအ ရှညျကွီးကိုဝတျထားပီး နကျပွောကျနသေော ရှူးဖိနပျစီးထားလကျြ စမတျကကြရြနသေော လူတယောကျဝငျလာလသေညျ.. “ဟာ..ကိုမွမောငျ..ခဗြားလာတာနောကျကပြီဗြ..ကြုပျတရားခံမိပီ.အဲ့တာမဲကွီးပဲ” စိနျဝငျး တယောကျ အောငျမွငျသောအသံကွီး နှငျ့ ကွှားဝါနလေသေညျ… ကိုမွမောငျ မှာ စိနျဝငျးကို စောကျဖကျမလုပျပဲ..ကွမျးပွငျပျေါထိုငျငိုနသေော ဖွူတုတျမ အနားသှား၍.. “ညမလေး..ကျောရီးမေးစရာရှိလို့.. ခဏလိုကျခဲ့ပါ..” ကိုမွမောငျ သညျ ဖွူတုတျကိုချေါ၍.. လူသတျမှုဖွဈရာ အခနျးသို့ ဝငျ သှားလသေညျ.. မွကတီပါမှယေ့ာကုတငျ စောငျးမှာ ဖငျကုနျးလကျြ သနေသေော ဒျေါမွကိုတှရေ့သညျ..
လှနျခဲ့သော မိနဈ၃၀မှာ အသတျခံရ၍ လတျလတျဆတျဆတျရှိသေးသညျ.. အသတျခံရပုံမှာ လညျဂုတျတှငျ ၆လကျမအရှယျဓား စိုကျခံရပီး.. စအိုဝနှငျ့ အဖုတျမြားမှာ သှေးထှကျလှနျသနေခွေငျးဖွဈသညျ.. ဒျေါမွသညျ ၄၅ နှဈအရှယျခြောမောလှပပီး ကြှဲကောသီးအရှယျနို့သားကွီးမြားရှိသလို ဖွူဖွူကိတျတိတျ တငျသားနှငျ့ အရပျမောငျး မွငျ့သော မိနျးမတယောကျဖွဈသညျ.. လငျသားမရှိသားသမီးမရှိ ကာလသားတိုငျးလိုးခငျြနသေောအကိတျမဖွဈသညျ.. ဖွူတုတျမှာ အလောငျးကိုမွငျပီး.. ”အမလေး မမကွီးရယျ အလိုးခံပီးသရေတယျလို့ဖွဈမှဖွဈရလေးဟု အျောကာငိုပွနျသညျ… ကွမျးပွငျအထကျမှာ မွပေဲစိအရှယျစိနျမြားပွနျ့ ကွဲနကွေသညျ..ကိုမွမောငျ တယောကျထိုစိနျမြားအတှငျးမှ ပစ်စညျးတခုကိုကောကျယူလိုကျပီး.. နှုတျခမျးမဲ့ကာပွုံးလိုကျလေ သညျ.. ကုတျအတှငျးစီးကရကျဘူးမှ တလိပျဆှဲယူ မီးညှိရှိုကျဖှာကာ..
“ညမလေး..က မဲကွီးနဲ့ လိငျဆကျဆံထားတာမကွာသေးဘူးမလား”. .ထိုသို့မေးခွငျးကွောငျ့ ဖွူတုတျလနျ့သှားလသေညျ..ဒါပမေဲ့ မဖွေ.. “နငျ မဖွရေငျ မဲကွီး တသကျတကြှနျးထောငျကလြိမျ့မယျ.. ဖွပေါ..”ထိုအခါမှ..ဖွူတုတျက သကျပွငျးရှညျခပြီး.. “ဟုတျ ပါတယျ..ကမြတို့အခနျးမှာ..ဆကျဆံနတောပါ”. . “ကြုပျဘလိုသိလဲ မေးခငျြတယျမဟုလား. နငျ့ ထမီနောကျမှာ အရတှေထှေကျ ပီးကှကျနတေယျလေ.. လိုးတာမကွာသေးလို့ပေါ့ဟ..နငျ့ အခနျးကို သှားကွတာပေါ့..အဲ့မှာဆကျပွောကွမယျ ကြုပျ ကိုသိမြှ အကုနျပွောပါ..နငျ့ဘဲမဲကွီးကိုငါပဲကယျနိုငျတယျ okလား”. . “ဟုကမြနောကျကလိုကျခဲ့ပါ.” မွမောငျနှငျ့ဖွူတုတျ ဒျေါမွအခနျးမှ ထှကျ၍ အောကျထပျဖွူတုတျအခနျးဆီသှားကွသညျ.. ပုလိပျမြားနှငျ့စိနျဝငျးတို့တသိုကျ အလောငျးသိမျးရနျ ပွငျဆငျနကွေ၍ သူ တို့နှဈယောကျကိုသတိမထားမိပေ..
ဖွူတုတျ နာမညျနှငျ့လိုကျအောငျ ဖွူဖွူတုတျတုတျဖွဈသညျ ခါးသေးသေးလေးမှာပနျးရောငျထမိနျ ခပျကွပျဝတျထား၍တငျသား မှာ အယျထှကျနသေညျ လိုးနခြေိနျမှာ အမှုဖွဈ၍ အတှငျးခံဝတျမထားပဲ လာကွညျ့ပုံရသညျ အရအေကှကျလိုကျပျေါတာ သတိမ ထားမိပေ၊ ဖွူတုတျ အခနျးထဲဝငျစဉျ မွမောငျကလိုကျဝငျပီးတခါးမငျးတုံးကိုခလြိုကျလသေညျ.. “ကဲ..ဖွူတုတျ ကုတငျမှာ ထိုငျ ပါ..ငါစမေးမယျ… မဲကွီးလီးက ဘယျလောကျကွီးလဲ..” “ကမြ မပွောတတျဘူးရှငျ့..မတိုငျးကွညျ့ဖူးဘူး.” “ဟုပီ..ငါပှမယြ”. ဟု ဆိုကာ.. မွမောငျက ဘောငျးဘီဇဈကိုဖွုတျခြ၍ သူ့လီးကိုထုတျပွလသေညျ.. ၈ လကျမ စျောကွညျလီးကွီးမှာအကွောအထဈ ထဈနှငျ့ အမွောငျးလိုကျပျေါလာလသေညျ”. “အို..ရှငျ..ဘာလုပျတာလဲ”
“ငါမေးတာ ဖွပေါ ငါ့လီးလောကျကွီးလား” “ရှငျက..နာမညျကွီးစုံထောကျဖွဈရုံမက. လီးပါ ပွိုငျစံရှားပဲ..ရှငျ့လီးတဝကျပဲမဲကွီး ကရှိတာပါ” “သေးလားကွီးလား..သိအောငျကိုငျကွညျ့ပါ.ဖွူတုတျ.” မွမောငျ ဖွူတုတျမကျြနှာရှလေီ့းကို တိုးကပျလိုကျပီး..ပွ လသေညျ.. ဖွူတုတျ တံထှေးမြားမွိုခလြိုကျပီး.. လီးကိုကိုငျကွညျ့လသေညျ.. “မဲကွီးဟာက သေးပါတယျ ရှငျ့ဟာက လကျထဲ မှာပွညျ့ရုံမက ထိပျဒဈကွီးပါအယျနတော.” “နငျ ဂျေါလီသိလား” “ဟုတျသိပါတယျ ပီးခဲ့တဲ့တပါတျက.. ကမြ က မဲကွီးကို ပွော တယျ ရှငျ့လီးကသေးတယျ ခံလို့မကောငျးဘူး ကွီးအောငျလုပျလိုကျပါ ပေါ့..ဒါကွောငျ့ သူ အပွငျမှာ ဂျေါလီထဲ့လာပါတယျ” “အဲ့ တော့ ဆကျပွောပါ.” ဖွူတုတျမှာ မွမောငျလီးကို ရမကျထနျထနျကွညျ့နလေကျြ ရှတေို့းနောကျဆုတျ ဂှငျးထုနမေိသညျ..
“သူဂျေါလီထညျ့လာတာ ဒီနတေ့ပါတျပွညျ့တာပါ ဒါကွောငျ့စမျးလိုးကွညျ့နတေုနျး ဒျေါမွချေါသံကွားတယျ”. ဒျေါမွက ဒနျပေါကျ စားခငျြတယျဝယျပေးပါပွောလို့ သူက ဟုတျကဲ့ ပွောပီး..အပွငျထှကျဟနျဆောငျတယျ..” တကယျတော့မသှားပါဘူး..နောကျဖေး အပေါကျကပွနျဝငျပီး..ကမြတို့ဆကျလိုးနကွေတာပါ..” “ဂျေါလီနဲ့လိုးတာ ကောငျးလား..” “မကောငျးပါဘူးရှငျ..အဖုတျ နှုတျခမျးသားတှနော လှနျးလို့ ကမြ မပီးနိုငျပါဘူး” ဖွူတုတျပွောပွတာနားထောငျရငျး မွမောငျလီး ထိပျအရညျကွညျမြားထှကျနေ လသေညျ..ဖွူတုတျလကျညှိုးလေးနဲ့ထိုအရကွေညျ့ကို ထိလကျြ ဒဈထိပျညိုကို ပှတျနပွေီး.. “မွမောငျ ကမြကို ဖငျကုနျးခိုငျးပီးလိုး ပါတယျ သူ့သုတျရညျ တှထှေကျတဲ့အထိပဲ..အဲ့အခြိနျ ဒျေါမွအျောသံကွားလို့ ကမြတို့လိုးတာရပျပီး..ဒျေါမွအခနျးဆီသှားတာ ပါ..အဲ့မှာ ဒျေါမွသနေပေီ”. .
“ဟုပီ..နငျ အမှနျပွောတာငါလကျခံတယျ.. မဲကွီး အပွဈမရှိတာ ငါကူညီမယျ.. နငျက င့လီးနဲ့လိုးတာတော့ခံရမယျ”. . … ..ဖွူ တုတျမှာတကောငျကွှကျမဖွဈသညျ မဲကွီးသာ သူ့ဘဝအဖျောဖွဈသညျ..မဲကွီးထောငျကလြငျြ သူ့ဘဝ ရစေုံမွောရပတေော့မညျ.. အဖွဈမခံနိုငျပါ..ခုကယျတငျရှငျတှပေီ့လေ ပီးတော့ ပွိုငျစံရှားလီးမြိုး နှငျ့မခံလိုကျရလငျြ နှမွောစရာဖွဈပမေညျ… “ဟုတျ ဆရာကွီး ရှငျလိုးပါ ပီးရငျ မဲကွီးကို ကယျတငျပါရှငျ..” မွမောငျ ခငျခငျလေးနဲ့ လိုးစဉျအခါက လီးစုပျတာခံဖူး၍ သတိရလိုကျ သညျ.. “အရငျဆုံး င့လီးကို စုပျပါ ရခေဲခြောငျးစုပျသလိုပေါ့..ပီးရငျ လဥကိုညငျညငျသာ နှိပျနယျပေးပါ.. အဲ့တာ ပီးရငျ မဲကွီးလိုး သလို ဖငျကုနျးလိုးပေးမယျ” ဖွူတုတျစစုပျပါတော့သညျ..မွမောငျသငျပေးတဲ့အတိုငျး တခုမှမမှားအောငျ လုပျတော့သညျ.. အာဂတှငျးနှေးနှေးကွား ဝငျထှကျနသေောဒဈကွီးကိုစုပျရတာအားရှိလှသညျ.. ပွှဈပွှဈ..အှငျး..ဘလှတျ… မွမောငျ အကွိုကျတှေ့ နပေီ.. “ရပီ..ကုနျးတော့.. ထမိနျလှနျထား” ကုတငျစောငျးဘေး လကျထောကျကုနျထားသောဖွူတုတျဖငျကွီးမှာ အယျထှကျ နသေညျ..
ဖွူတုတျခါးကို ဖိခလြိုကျပီးကော့တတျလာသော ဖငျသားကွီးအောကျမှ စောကျဖုတျ ကွီးအရညျရှဲ၍ အလိုးခံဖို့အသငျ့ရှိနသေညျ.. မွမောငျအခြိနျဆှဲလို့မဖွဈ တရားခံဖမျးရအူးမညျ… လီးကို အဖုတျဝတှေ့၍ လိုးပါတော့သညျ ဘှတျ..ဘှတျ..ဗွိဗွိ…အ့..ရှီး.. စ ပတျအတှငျး တငျးကွပျဝငျလာသောလီးကွီးကိုစပအတှငျးနရံနှငျ့ ညဈကာ ပေါငျကိုစိပေးလိုကျသညျ.. မွမောငျ လကျမြား ဖွူ တုတျ နို့မြားကိုလှမျးညဈလိုကျပီး..အခကျြမှနျမှနျလိုးတော့သညျ.. ကောငျးလိုကျတာ..ရှငျကွီးရယျ..မဲကွီးထကျအစတရာသာ တယျ..လိုးပါ မရပျပါနဲ့ ကမြ ပီးတော့မယျ” “ဂျေါလီနဲ့လီးကွိုကျလား င့လီးကွိုကျလားပွောစမျး” တငျသားမြားကို လကျဝါးနှငျ့ တဖွနျးဖွနျးရိုကျပီး.. လိုးမေး..မေးတော့သညျ.. “ရှငျ့လီးကောငျးတယျ..အ့..အ့..” ဘှကျ ဘှကျ..အရညျမြားပမျးထှကျကွလာ သညျ..မွမောငျ လီးကိုဆှဲထုတျ၍.. “ဟဲ့ နငျပီးပီမဟုတျလား..ဒီဘကျလှညျ့လီးပွနျစုပျတော့…” ဖွူတုတျကွမျးမှပွနျထိုငျ၍ လီးကို အဆကျမပွတျ ပွနျစုပျတော့သညျ..
ွပွဈ….ွပွဈ…ွပွဈ.. “အ့..ငါ သုတျလှတျတော့မယျ.စုပျစုပျ… အီး….” ဖွူတုတျခေါငျးကိုဆှဲကိုငျ၍ လရညျမြားအာဂေါငျတှငျး ပနျးထညျ့လိုကျလသေညျ… အဟှတျ..အဟှတျ.. ဖွူတုတျဘာမှမတတျနိုငျ မွိုခလြိုကျရာ.. အနညျးငယျသီးသှားလသေညျ.. “ကဲ..ပီးပီ..ငါလဲ တရာခံသှားဖမျးရမယျ” မဲကွီး နောကျနမှေ့ာ နငျ့ဆီ ပွနျပို့ပေးမယျ ဟုပီလား”. . “ကြေးဇူးကွီးပါပေ့..ရှငျကွီး ရယျ.. ရှငျလိုးခငျြရငျ ကမြဆီ အခြိနျမရှေးလာခဲ့ပါ..ရှငျ့ကိုစှဲသှားပီ”. . မွမောငျ ဘောငျးဘီဇဈပွနျပိတျ၍… “ဟဲ့ နငျအရေ တှေ သု တျပီး အနားယူတော့..ငါသှားပီ”. .. ….အိမျရှေ့ ဧဲ့ခနျးမ အတှငျး.. မငျးကွီး ဆမွူရယျရောကျရှိနသေညျ.. “ဟာ လူကလေးမွမောငျ အလာနောကျကတြာလား.ဒီမှာ စိနျဝငျး က တရားခံမိနပေီ..ဟား..ဟား” ..မွမောငျ ထိုသူမြားကို စောကျဖကျမလုပျပဲ သတငျးသမားကွားကွညျ့လိုကျရာ.. ဖာဂေါငျးထှနျးကွညျကိုတှလေို့ကျ၍.. “ကိုထှနျးကွညျရေ..အခြိနျနောကျမကခြငျ တရာခံ သှားဖမျးရမယျ..ခမြားလိုကျမှဖွဈမယျဗြ”. .. “ဟုတျပါပီ..ဆရာသမားရေ..သှားကွစို့” ……ဤတှငျ (ဆားပုလငျးမွမောငျနှငျ့ ဆယျ ဂျေါလီတုတျကွီး) အမညျရ သညျးထိတျရငျခုနျဖှယျ ဇာတျလမျးကွီးစတငျ ဖွဈပျေါလာလသေညျ။
ကိုမွမောငျနှငျ့တပညျ့ကြျောဖာဂေါငျးထှနျးကွညျတို့ အျောစတငျကား လေးဖွငျ့ တရားခံဖမျးရနျထှကျလာကွလသေညျ.. သိပျမ ကွာပါ ကွညျ့မွငျတိုငျ ဟံသာဝတီဘူတာသို့ ရောကျရှိလသေညျ “ကိုထှနျးကွညျရရေောကျပီဗြို့သှားကွရအောငျ” ..”ဟာ..ဆရာ သမား ဒါအနူတှနေတေဲ့နရောလဗြော.. (ယခု အရိုးအထူးကုဆေးရုံ). . “ဟုတျပ..အဲ့မှာ ဂျေါလီထဲ့ပေးတဲ့အိမျရှိတာ ခကျဗြားလဲ သိတာပဲ..သှားကွရအောငျ”. “ဆရာသမားပစ်စညျးက ကွီးပီးသားလဗြော..ဂျေါလီထညျ့အူးမလို့လားဗြ..ဟားဟား…” “ကဲ..နောကျမှပွောကွမယျ..တရားခံလှတျသှားမယျဗြ..” ….နှဈထပျအိမျတခုဖွဈသညျ.. တံခါးဝရှရေ့ောကျသောအခါမွမောငျ က သနေတျကို အသငျ့ကိုငျထားပီး..ခေါကျလိုကျလသေညျ.. ဒေါကျ..ဒေါကျ..ဒေါကျ.. “ဘာကိစ်စလဲရှငျ့.” .လှပကြော့ရှငျးသော မကျြနှာကလေးနှငျ့ ရှိုကျဖိုကွီးငယျ ပွညျ့စုံသော မိနျးခလေးက တံခါးလာဖှငျ့ပေးလသေညျ…
“ခငျလေး..မတှတေ့ာကွာပီနျော..မဈနတော..ကြုပျ တုတျကွီးနဲ့တှခေ့ငျြလို့ပါ.” “ရှငျ့ သနေတျကွီး ခလြိုကျပါရှငျ..ရနျသူတှမှေ မဟုတျတာ” ခပျခြှဲခြှဲလသေံလေးနှငျ့သူမပွောနသေညျ. ..ထိုစဉျ သူမနောကျမှ..ဒေါငျကောငျးကောငျးနှငျ့ရုပျရညျသနျ့ပွနျ့သော ယောကျြားတယောကျ ထှကျလာပွီး.. “ဟာ..ကိုမွမောငျ..ကြုပျထငျတာထကျ စောပီးရောကျလာပါလား..ဂျေါလီထဲ့မလို့လား ဗြ..ဟား..ဟား”. .ထိုသူမှာတုတျကွီးဖွဈသညျ.. ဘိုငျစကုတျမငျးသားလို ခပျနှဲ့နှဲ့အနအေထားရှိပမေဲ့..ဒီနယျတခှငျမှာနာမညျကွီး လူမိုကျဖွဈသလို လူသတျရနျဝငျမလေးသောသူဖွဈသညျ.. “ကိုတုတျကွီး..အေးဆေးအဖမျးခံပါဗြာ.. ခမြားကွောငျ့ အပဈမဲ့တဲ့သူ ထောငျကတြော့မယျ” အပွဈမဲ့သူဆိုသညျမှာ အပိုငျး၁ မှ ဒရိုကျဘာမဲကွီးကို ဆိုလိုခွငျးဖွဈသညျ..
“ဟုတျပါပီ..ဒါနဲ့စကားမဆကျ ကြုပျသတျတာဘလိုသိတာလဲဗြ”. . ..မွမောငျတခကျြပွုံးလိုကျပီးအိပျကပျအတှငျးမှ မွပေဲစိအရှယျ လကျရာမွောကျ ဖနျဂျေါလီလေးထုတျပွလသေညျ.. “ဂျေါလီ တခု တှတေ့ာနဲ့သိရောလားဗြ”. . “ဟားဟား..ရနျကုနျတဝိုကျမှာ..ဒီ လိုဂျေါလီ လုပျတာခဗြားပဲရှိတယျ ပီးတော့ ဒျေါမွလေးသတေုနျးက စိနျတှပွေနျ့ကြဲနတေယျလေ..အဲ့ကွားထဲကကြုပျကောကျရ တာ..ခမြားကလောဘသားမဟုတျဘူးဆိုတာကြုပျသိတယျ.. ဒါကွောငျ့ ဘာပစ်စညျးမှမယူပဲ ထှကျပွေးသှားတာမဟုတျလား”. .. …”ကဲ ဖမျးပါတော့ဗြာ..” “ကိုထှနျးကွညျ သူ့ကိုလကျထိပျခကျပီး ချေါသှားလိုကျပါ..ဂါတျရောကျမှဆကျမေးကွတာပေါ့..ကြုပျခငျ လေးကို မေးစရာရှိသေးလို့နခေဲ့မယျ”. …… ….ထှနျးကွညျမှာတုတျကွီးကိုချေါသှားပီနောကျ..မွမောငျ နှငျ့ခငျလေး ကနျြခဲ့လေ သညျ… ခငျလေးမကျြရညျလေးတှဝေဲနသေညျ.. “စိတျမကောငျးပါဘူး မခငျလေး..ခမြားနဲ့ကြုပျထှနျးကွညျအိမျမှာ လိုးတဲ့နကေ လူသတျမှု ဖွဈတာ ခမြားလညျးသိတာပဲ..ကြုပျနယျပွောငျးရလို့..ခမြားအကိုတုတျကွီးကို မဖမျးခဲ့ဘူး..
ခမြားက ကွံရာပါဆိုတာသိပါတယျ”. . ..ခငျလေး မကျြရညျမြားကပြီး.. “ရှငျ သိလား ကမြ အပြိုရညျကိုရှငျ့ကိုပေးပီးနောကျပိုငျး.. ရှငျ့ကိုအမွဲသတိရနတေယျ..အဲ့နကေ့.. ကမြတို့ရဲ့ရနျသူတှကေိုသတျမလို့အကှကျဆငျပီးသားလေ..ရှငျက အဖမျးအဆီးတျော လို့ ကမြအပြိုရညျကိုရှငျ့ကိုပေးပီး အကိုတုတျကွီးလူသတျလို့ရအောငျ စီစဉျခဲ့တာပါ ရှငျ ဖမျးခငျြရငျဖမျးပါ ကမြမငွငျးပါဘူး” မွ မောငျစိတျမကောငျးဖွဈမိပီး.. သူမပခုံးသားလေးကိုဆှဲကိုငျကာ.. “ခငျလေးရယျ ဖမျးစရာလား.ကျောရီးက ခငျလေးကို..သတိရ နတောပါ..ပီးတော့ ဒီနှုတျခမျးရဲ့ စုပျခကျြတှကေို လိုခငျြသေးတယျလေ”. .. မွမောငျ သူမကို နှုတျခမျးခငျြးတပေီ့းလြှာလေးနဲ့ မှေ လိုကျသညျ.. “အို…ကိုရယျ..ကမြ ခံခငျြတယျ လိုးကွမလားဟငျ” ခငျလေးမကျြရညျမြားကွားမှ တောငျးဆိုလာသလိုခါးလေးကော့ ပေးပီး သိုငျးဖကျ လာလသေညျ..
အိမျရှတှေ့ငျ ထမငျးစား စာပှဲသာရှိသညျ. ထိုစာပှဲပျေါ ခငျလေးကိုမတငျလိုကျသညျ.. ရငျဖုံးအငျးကြီလေးကို ကွယျသီးဖွုတျလိုကျ သညျ.. ဘျောလီမရှိ လှတျလှတျကြှတျကြှတျပျေါလာသော နို့သားဝငျးဝငျးလေးကိုဆုတျနယျပေးလိုကျသညျ..အငျး…ကိုရယျ နို့စို့ ပေးပါ.. မွမောငျနို့ကုနျးစို့ရငျး..ပါတိတျထမိနျကိုဆှဲလှနျ၍..အဖုတျသားနုနုလေးထဲလကျခလယျ သှငျးလိုကျလသေညျ… …ခငျ လေးမှာ မွမောငျရဲ့ဆံပငျကို ဆှဲကိုငျထားပီး..ခေါငျးမော့ကာဖီးတကျနသေညျ.. “ကို ရယျ..ရှငျ တခါလိုးပီးကထညျးက.. ကမြ ဘယျ သူနဲ့မှ မခံခဲ့ပါဘူး..တနရှေ့ငျလာမယျဆိုတာသိလို့ စောငျ့နတောပါ..အားရပါးရလိုးပေးပါ..” ..”ခငျလေး..စုပျပေးနျော..”
သူမ ခုံပျေါမှပွနျဆငျး၍.မွမောငျရဲ့ဘောငျးဘီကိုခြှတျပေးသညျ..ထောငျမတျနသေောလီးက အကွောအပွိုငျးပွိုငျးနှငျ့ ရငျဖိုစရာ ကောငျးလှသညျ.. နှုတျခမျးဖူးဖူးလေးနှငျ့လီးထိပျကိုငုံလိုကျပီး..လြှာလေးနဲ့ မှပှေတျလိုကျရာ… “အား.. ကောငျးလိုကျတာ..” မွ မောငျ ခါးကော့သှားလသေညျ.. ရှညျလှနျးသော လီးဖွဈ၍ အကုနျမသှငျးနိုငျပဲ တဝကျလောကျသာစုပျပေးနိုငျသညျ.. လီး အောကျခွကေငျြကွောကို လြှာနဲ့အထကျအောကျပှတျဆှဲပီး လဥကိုစုပျလတေော့သညျ… လဥစုပျနစေဉျ လှတျနသေောလီးကိုဂှငျး ထုပေးပွနျသောအခါ မွမောငျမခံနိုငျပါ သုတျမြားပနျးထှကျပါတော့သညျ… ..”ဟာ ကမြ မခံရသေးဘူးလေ. “ “မပူနဲ့ခငျလေး ကြုပျလီးက မကဘြူး.. ကုနျပေးစမျးပါ”. .ထမီခြှတျခပြီး ခုံဇောငျးမှာ ခငျလေး ခါလေးကော့ကုနျးလိုကျသညျ..
ဆံပငျ ရှညျမြားကို မွမောငျဖွခေလြိုကျပီး စုကိုငျကာ.. ခပျစီးစီး အဖုတျထဲ လီးထိုးထဲ့လသေညျ.. မွငျးလိုးသညျ့ပုံစံဖွဈသညျ.. တငျသားနှငျ့ ဆီးခုံရိုကျခကျြနှငျ့လိုးသံမြားထှကျလာတော့သညျ…ဇိ..ဇိ.ဇိ..ဖတျ..ဖတျ.. “အား..တဆုံးထဲ့လိုး..ကောငျးတယျ. အား….”ခငျလေးအျောဟဈ နရေငျး သေးမြားပငျ ထှကျကွတော့သညျ.. သူမ တကိုယျလုံးတဆတျဆတျတုနျခါနသေညျ. မွမောငျ လီးကိုဆှဲထုတျလိုကျပီး ဖကျသားဖှေးဖှေးကွီးကို ဆှဲဖွဲလိုကျ၏.. ခရပှေငျ့အလား စူနသေော စအိုလေးကို မွငျတော့လိုးခငျြ စိတျပေါကျလာသညျ.. ..မွမောငျမှာ အင်ျဂလနျအလညျသှားစဉျက ဖငျလိုးသော ပုံမြားမွငျဖူးသညျ.. “ခငျလေး ဖငျပေါကျက လှ လိုကျတာလိုးခငျြတယျ”. . “ရှငျကွီး သဘောပါ ရပ့မလားရှငျ.. အရမျးသေးတယျ”. . မွမောငျလီးထောကျကွညျ့ရာ စအိုဝပြောကျ သှားသညျ..သှငျးလို့မရ.. “ခငျလေး ဘာဆီရှိလဲ”. . “မုနျ့ညှငျးဆီတော့ရှိတယျ..ယူပေးမယျ”. . ခဈြဖို့ကောငျးသောခငျလေး ပါ..အခနျးထောငျ့စငျကလေးမှ မုနျ့ညှငျးဆီဘူး ယူလာလသေညျ..
မွမောငျရဲ့လီးကို ဆီသုတျပေးပီး..ပွနျကုနျးလိုကျသညျ.. ထို့နောကျ လီးကို စအိုဝတှေ၍ သှငျးလိုကျရာ..ခြောကနဲဝငျသှားတော့င ညျ..အား…အီး..နာတယျ…. ခငျလေး ထအျောလတေော့သညျ.. “ဖငျက ပိုလိုးကောငျတယျဟ..ငွိမျခံပတေော့..” ..ဗွိ.. ဘှတျ..ဘှတျ..ဘှတျ..အတှငျးလမြေားကနျထှကျ၏..ထိုအသံမြားက ကာမစိတျပိုမိုထနျစလေသေညျ.. “ကောငျးလာပီကိုရေ မရပျနဲ့ လိုးလိုး..အ့” ..ခုံက တဖွညျးဖွညျးပိုနဲ့လာ၍..ကြိုးမှာစိုးရသညျ… ထိုကွောငျ့ ကွမျးပွငျပျေါ ရှလေို့ကျပီး.. မုဆိုးဒူးထောကျဆကျ လိုးတော့သညျ… ကှမျးတရာညကျခနျ့အကွာ.. မွမောငျ့ သုတျရညျမြား ဖငျထဲပနျးထညျ့လတေော့သညျ… “ဟူး…ကောငျးလိုကျ တာ”. . ခငျလေးမွမောငျကို တငျးတငျးကွပျကွပျဖကျထားပီး… “ကမြ အကို အမှုပီးရငျ..ကမြဆီလာခဲ့ပါနျော”. . ..အငျးပါ ကှာ…….. ..နောကျတခြီလောကျထပျလိုးကွပီး.. မွမောငျ တာမှဂေါတျဆီသို့ပွနျလာခဲ့သညျ..
မငျးကွီး ဆမွူရယျ အလှနျပြျောရှငျနသေညျ.. “လူကလေးမွမောငျ အရမျးတျောတယျ.” … “ဟို သတောငျးစား စိနျဝငျးဖမျးထား တဲ့ မဲကွီးကို ခုလှတျပေးလိုကျပါမငျးကွီး.. သူ့မိနျးမစောငျ့နတေယျ”.. ..ဆားပုလငျးမွမောငျပဲလေ..တျောမှာပေါ့. “လူကလေး ဒီ ညအားရငျ ကြုပျအိမျလာခဲ့ပါ ညစာနဲ့ဂုဏျပွုခငျြလို့ပါ…” “ကြုပျမှာ တုတျကွီးရဲ့ အမှုမှတျတမျးရေးရအူးမယျ.ပီးရငျလာခဲ့မယျ..” မွမောငျ ထိုသို့ပွောပီး စီးကရကျတလိပျဖှာရှိုကျ၍.. တုတျကွီးကို ဖမျးထားသော အခြုပျခနျးဆီ ထှကျလာခဲ့လသေညျ… …
”ကဲ..ကိုတုတျကွီးရေ..ခမြားရဲ့အမှုမှတျတမျးတငျရအောငျ..ပွောပတေော့”. . ..စီးကရကျတလိပျကို တုတျကွီးပါးစပျမှာတတျလိုကျ ပီးမီးညှိပေးလိုကျသညျ “အဖွဈက ဒီလိုဗြ” ဆာပုလငျးမွမောငျတယောကျ တုတျကွီးရဲ့ဝနျခံထှကျဆိုမှုမြားကို. မှတျတမျးတငျ ပွုစုပွီး..မငျးကွီးဆမွုရယျအိမျသို့ ညစာစားရနျသှားလတေော့သညျ.. အရာရှိကွီးဖွဈ၍ အိမျမှာလှနျစှာကွမားခနျ့ထညျလှပေ သညျ ခွံစောငျ့ကုလားမှတခါးဖှငျ့ပေး၍ အိမျတှငျးဝငျရလသေညျ ထမငျးစားပှဲမှာတျောတျောရှညျလသေညျ ဆယျပပေကျလညျ လောကျရှိသညျ စားပှဲပျေါတှငျ သဈသီးမြားဝိုငျမြားနှငျ့ အသားကငျမြားတငျထားလသေညျ “ဟာ လူကလေးမွမောငျ လာဟေ့ ကြုပျစောငျ့နတောကွာလှပီ” မွမောငျမှာ မငျးကွီးမကျြနှာခငျြးဆိုငျမှာ ထိုငျလိုကျသညျ
“ဂှတျ ညနေ မငျးကွီး ကြုပျနောကျကလြို့ ခှငျ့လှတျပါ” မငျးကွီး ဝိုငျမြားအလှနျ သောကျထားပုံရသညျ မူးနလေသေညျ ထိုစဉျ အမြိုးသမီးတယောကျ စားပှဲဘေး အလညျခုံမှာ ဝငျလာထိုငျလသေညျ “လူကလေးရေ ဒါက ကြုပျမိနျးမပဲ မနကေ့မှရောကျလာ တာ စငျသီယာလို့ချေါတယျ” မွမောငျ ထရပျ၍ “ကြုပျက မွမောငျပါ စငျသီယာ” ဟုဆိုပီးလကျဆှဲနှုတျဆကျလိုကျသညျ ဆံပငျ အိုမီဂါကနှေငျ့ဂါဝနျဖွူပါးပါး ဝတျထားသဖွငျ့ စငျသီယာ၏ကိုယျလုံးကို မွငျနရေလသေညျ အင်ျဂလနျသူ ဖွူခြောကွီးဖွဈသညျ “ရှငျက အင်ျဂလိပျစကား တျောတျောကြှမျးကငျြတာပဲ” ဟု စငျသီယာက ခြီးကြူးလသေညျ မငျးကွီးမှာမူးနေ၍ စကား ကောငျးကောငျး မပွောနိုငျတော့ပါ စငျသီယာလညျးအနညျးငယျသောကျထား၍မူးနလေပေီ တနာရီလောကျအကွာမှာ စငျသီယာ က “မငျးကွီးကိုအိပျခနျးထဲပို့ရမယျကူညီပေးပါ”
“Okပါ စငျသီယာ” မငျးကွီးကိုတယောကျတဖကျဆီ မလိုကျကွသညျ စငျသီယာကုနျးမလိုကျရာ ရငျသားမြားမွငျရလသေညျ ဖွူဖွူ အိအိကွီးမြားပငျ ဂါဝငျအောကျမှ အတှငျးခံအနကျလေးမှာ ကွိုးသိုငျးအတှငျခံဖွဈ၍ တငျသားမြားကို အရှငျးကွီးမွငျရလသေညျ လိုးသညျ့အခါမှာခြှတျစရာမလိုပဲ အလညျကွိုးလေးကိုဖယျလိုကျရုံနှငျ့ တနျးလိုးလို့ရပသေညျ အိပျခနျးကုတငျမှာ အကွီးကွီး ဖွဈသညျ လူလေးယောကျလောကျအိပျလို့ရနိုငျသညျ မငျးကွီးကို ကုတငျပျေါတငျပေးပွီနောကျ စငျသီယာက “မွမောငျ မငျး သောကျခငျြသေးလား” “သောကျမယျလေ ကြုပျက နညျးနညျးနဲ့မဝဘူး” ဟုပွောပီး စငျသီယာ၏နို့ကို ကွညျ့နမေိသညျ မငျးကွီး အသကျမှာ၅၀ ကြျောလပေီ စငျသီယာက ခုမှ ၃၀ကြျောရှိသေးသညျ
“စငျသီယာကြုပျမူးသှားရငျ ဘာလိုလုပျမလဲ” “ဒီမှာအိပျလေ မနကျမှပွနျပေါ့” “Ok အာ့ဆို အမူးသောကျမယျ” သူတို့နှဈဦး ရောကျတတျရာရာ စကားပွောရငျးသောကျရငျးနှငျ့ စငျသီယာမူးပါတော့သညျ “ကမြသှားအိပျတော့မယျရှငျသောကျလို့ ပွီးရငျ အဆငျပွသေလိုအိပျလိုကျပါ ဂှတျနိုကျ” သူမ ထလိုကျရာမူးလဲသဖွငျ့ မွငျ့မောငျက ခြိုငျးအောကျကမ၍ အိပျခနျးထညျးထဲ့စဉျ နို့ ကွီးနှဈလုံးကိုကိုငျမိ၍ လီးမှာထောငျထလာလသေညျ စငျသီယာကိုကုတငျပျေါတငျပေးလိုကျသညျ ထို့နောကျ အခနျးပွငျ ထှကျဟနျ ပွပီး အခနျးတခါးကိုအသာလေးစကေ့ာ ခြောငျးနလေိုကျလသေညျ
သိပျမကွာပါ သူမ မငျးကွီးဘကျလှညျ့၍ ဘေးစောငျးအိပျလိုကျပီး ဂါဝငျကို တငျသားမြားပျေါအောငျဆှဲတငျ၍ ပေါငျလုံးကွီးကို ကုတျနလေသေညျ ညမီးက မှိနျမှိနျလေးထှနျးထားသျောလညျး အသားဖွူလှနျး၍ တငျအဖှေးသာကွီးကို မွငျရလသေညျ ဒီညရ အောငျလိုးမညျဟုဆုံးဖွတျလိုကျသညျ စငျသီယာ မအိပျသေး မူးခငျြယောငျဆောငျခွငျးဖွဈသညျ မွမောငျ၏အကွညျ့မြားမှာမရိုး ပေ တဏှာမကျြလုံးမြားနှငျ့ သူမကိုကွညျ့နတောသိသညျ မငျးကွီးမှာအသကျကွီး၍ မလိုးနိုငျတာကွာလပေီ မွမောငျ ခြောငျးနေ တာ သိသညျ ခွသေံကတံခါးနားမှာ ရပျသှားပီး တံခါးပိတျသံလဲမကွား၍ဖွဈသညျ ထို့ကွောငျ့ တဖကျလှညျ့၍ ပေါငျယားသလိုလုပျ ကာ ဂါဝနျကို လှနျထားလိုကျသညျ ကိုမွမောငျ ဝငျမလာ၍ စိတျမရှညျတော့ တငျကိုပိုကော့လိုကျပီး ဂါဝနျကို နို့ပျေါအောငျထပျလှနျ လိုကျလသေညျ
မွမောငျစိတျမထိနျးနိုငျတော့ လီးမှာလညျး အရညျတှထှေကျနလေပေီ ထို့ကွောငျ့ ကုတငျနားကပျသှားလိုကျသညျ.. ဘေးစောငျး ကာကောကျနသေောဖငျကွောငျ့ လိုးရနျ အဆငျပွလေပေီ ကုတငျပျေါဖွေးဖွေးတကျလိုကျပီးတငျသားကွားညပျနသေော အတှငျးခံဘောငျးဘီ ကွိုးလေးကို ဖယျလိုကျရာ ပနျးရောငျစအိုဝနှငျ့ အရညျလဲ့နသေော အဖုတျရဲရဲလေးကိုတှရေ့လသေညျ စငျသီ ယာကို အသာလေး တှနျးမှောကျကွညျ့လိုကျ၏ အလိုကျသငျ့လေး မှောကျသှားလသေညျ ဘောငျးဘီခြှတျကာပေါငျပျေါခှလိုကျပီး လီးဒဈနှငျ့ အဖုတျဝကိုပှတျလိုကျရာ ဖငျလုံးလေးကော့တကျလာတော့သညျ လီးကိုဖွေးဖွေး တဆုံးထိသှငျးလိုကျ ထုတျလိုကျလိုး နလေိုကျ၏ အရမျးကွမျးလို့မဖွဈပေ ဘေးမှာအိပျနသေော မငျးကွီးနိုးသှားလငျြ ပွသနာကွီးပမေညျ
အဖွူမအဖုတျမှာ အိစကျညကျညောလှနျးသညျ စငျသီယာတခကျြငွီးလိုကျပီး ဒူးထောကျဖငျကုနျးပေးတော့သညျ မကျြနာကို ခေါငျးအုံးနှငျ့အပျထားပွီး ပါးစပျကို သူ့လကျနှငျ့သူ ပွနျပိတျထားလသေညျ သူမ မအိပျဘူးဆိုတာ မွမောငျသိ၍ ပြျောသှားလသေညျ ထို့ကွောငျ့မတျတပျအပျေါမှရပျ၍ တငျသားနှဈခုကိုထိနျးကိုငျကာ အပျေါဘကျမှ စိုကျလိုးပါတော့သညျ အ့ “ရှူး စငျသီယာ ကုတငျ ပျေါက ဆငျးရအောငျ” လိုးသံမြားထှကျမှာစိုး၍ဖွဈသညျ ကွမျးမှာကတီပါခငျးထား၍ သူမ လှဲခလြိုကျသညျ သူမအသံမထှကျ အောငျ နှုတျခမျးခငျြးတေ့၍ပိတျထားလိုကျပီး စောငျ့စောငျ့လိုးပါတော့သညျ အူး..အှငျး အဖွူမအသားမှာ တကယျစားကောငျးသညျ စာရေးသူ နိုငျငံခွားထှကျစဉျက စားဖူး၍ဖွဈသညျ မွမောငျလီး ကွီးရှညျကွောငျ့ သူမကွာကွာမခံနိုငျပါ
အရထှေကျ၍ပီးသှားလသေညျ မွမောငျဆကျမလိုးတော့ပဲ လီးကို သူမပါးစပျထဲထိုးထဲ့ရာ သူမအထာသိလသေညျ အလိုကျသငျ့ လေးစုပျပေးသဖွငျ့ သုတျမြား ထှကျကုနျတော့သညျ စငျသီယာကအရမြေားကိုမွိုခပြီးနောကျ “မွမောငျ ပွနျတော့နျော နောကျနေ့ ထပျတှမေ့ယျ မငျးကွီးနိုးလာမှာစိုးလို့” “Okပါ ကြုပျပွနျတော့မယျ” နောကျတနမေ့နကျ မွမောငျသညျ တုတျကွီး၏ဝနျခံခကျြမြား ကို ပွနျလညျဖတျရှုစီစဈနသေညျ ဝနျခံသကျသခေကျြမြားမှာ လှနျစှာရှညျလြှားလှနျး၍စာရေးသူ အကဉျြးခြုံ့လိုကျသညျ ရနေံ ခြောငျးမွို့တှငျးတနရော လူကုနျထနျသဋ်ေဌးမြားနသေောရပျကှကျတှငျ မောငျမောငျတုတျနှငျ့ခငျခငျလေးတို့ မိသားစုနထေိုငျကွ သညျ ရတနာကုနျသညျမြားဖွဈကွ၍ လှနျစှာခမျြးသာကွသညျ …မွမွနှငျ့ဘရှဆေိုသောအသကျ၂၀အရှယျမောငျနှမနှဈဦးမှာထိုအိမျ တှငျအလုပျလုပျကွသညျ..
တနတှေ့ငျသူတို့နှဈဦးမှာအိမျရှငျတှကေိုလုပျကွံသတျဖွတျ၍ရတနာမြားကိုခိုးယူကာထှကျပွေးသှားကွသညျ.. …မောငျတုတျနှငျ့ ခငျလေးတို့မှာမိဘမဲ့မြားဖွဈသှားကွလသေညျ..ထိုကွောငျ့ဆနျစကျသဋ်ေဌးဦဘကလေးမှခငျလေးတို့အားချေါယူမှေးစားကာ ကွီးပွငျးစခေဲ့လသေညျ.. …အရှယျရောကျလာသောမောငျနှမနှဈယောကျရနျသူမြားအားလကျစားခရြေနျ စီစဉျကွလသေညျ… … မောငျတုတျသညျပညာမတတျပေ..သူဝါသနာပါသောကြောကျသှေးသညျအလုပျလုပျရငျးရနျသူမြားကိုရှာဖှလေသေညျ.. …တ ယောကျထဲရှာဖှရေတာအစဉျမပွေ၍ လူမိုကျမြားကိုငှပေေးကာခိုငျးစလေသေညျ..နှဈအနညျးငယျအကွာမှာလူမိုကျခေါငျးဆောငျ တုတျကွီးဖွဈလာလသေညျ.. …လူမိုကျဖွဈသှား၍ရတနာကြောကျသှေးအလုပျကအဆငျမပွတေော့..ထို့ကွောငျ့ ဂျေါလီသှေး လသေညျ..ဂျေါလီမြားမှာလကျရာမွောကျလှသဖွငျ့တဏှာရူးနှာဘူးမြားကလာရောကျဝယျကွထညျ့ကွလသေညျ…
…သူကိုယျတိုငျလညျး လီးပတျလညျမှာ အရှငေ့ါးလုံးအနောကျငါးလုံးကှငျးလိုကျထညျ့ပီးကွငွောပွသဖွငျ့..ဆယျဂျေါလီတုတျကွီး ဟုအမညျတှငျခဲ့လသေညျ… …တနတှေ့ငျရနျသူတျောဘရှတောမှတှေငျနထေိုငျသညျဟုသိလိုကျရသညျ.. …ထိုအရပျသညျဆား ပုလငျးမွမောငျ၏အပိုငျဖွဈ၍အရမျးမလုပျရဲပေ.. ထို့ကွောငျ့ခငျခငျလေးကိုအကွောငျးကွား၍မွမောငျနှငျ့လိုးပှဲဆငျနှဲခြိနျဘရှကေို သတျရနျစီစဉျကွလသေညျ.. ..(ထိုဇာတျလမျးကိုအပိုငျး၁တှငျတငျပွပီးဖွဈသညျ). .#ရှကွောမောငျ.. …မွမောငျနှငျ့ခငျလေး လိုး ရညျလူးနခြေိနျ ဘရှကေိုသတျကာမောငျတုတျပုနျးရှောငျနလေိုကျသညျ.. ..ဒျေါမွမွအလှညျ့ကနျြလသေညျ.ဒျေါမွမှာခိုးယူသှား သောရတနာမြားကိုဘရှနှေငျ့တဝကျစီခှဲယူ၍ရတနာကုနျသညျအဖွဈတဦးထညျးနလေသေညျ.အိမျထောငျမပွုပေ ..ဒျေါမွသညျ တဏှာကွီးသောမိနျးမတဦးဖွဈသညျ.တပါတျတခါယောကျြားဖာမြား ကိုချေါယူ၍အလိုးခံကာကာမစိတျဖွဖြေောကျလသေညျ.. …တုတျကွီးသိလိုကျရသညျ..ထို့ကွောငျ့ ရနျကုနျရှိနာမညျကွီးစကော့ဈေးနှငျ့ပနျးဆိုးတနျးအရပျမှဖာတနျးမြားမှာ မမမြားအတှကျ လိုးပေးသူဟုအမညျမှဲ့ကာ..ကွငွောလသေညျ..
..သိပျမကွာပါဒျေါမွအငှါးလငျလာရှာလသေညျ..တုတျကွီးဒျေါမွနှငျ့တှလေ့ပေီ… “မမ..ကနြျောကစိတျတိုငျးကစြရေမယျ နျော..ငှကွေေးက မမသဘောပါ”. . ဒျေါမွ မှာ အရပျမွငျ့မွငျ့နှငျ့ရုပျခြောသော ကောငျလေးကို စားခငျြသှားသညျ.. ထို့ကွောငျ့… “မောငျလေးက..ကွာကွာလုပျနိုငျပ့မလား မတျမတျက တကျထှကျမကွိုကျဘူးနျော အနညျးဆုံး မိနဈ၃၀မှကွနေပျတာ”. .. “ကွာစရေမယျ မမ..စိတျတိုငျးမကရြငျ.. မမစီးတဲ့ဖိနပျနဲ့ မောငျလေးကိုရိုကျပါနျော ..” မကျြနှာငယျလေးနှငျ့ပွောဆိုနသေောကွောငျ့..ဒျေါမွ အသညျးခိုကျကွှဆေငျးလပေီ.. ..ထို့နောကျ အိမျလိပျစာရေးပေးလိုကျပီး.. “နကျဖွနျည၉နာရီလာခဲ့မတျမတျ စောငျ့နမေယျ..ခွံတခါးဖှငျ့ပေးထားမယျ.ဝငျလာခဲ့” …နောကျနညေ့..ဒျေါမွအလိုးခံဖို့ပွငျဆငျနလေသေညျ..၉..နာရီမထိုးခငျထညျး က.. မောငျတုတျမှာအိမျထညျးရောကျနှငျ့နလေပေီ…နောကျဖေးခွံစညျးရိုးကြျောဝငျခွငျးဖွဈသညျ..
…အိမျနေါကျအခနျးတခုတှငျအိမျဖျောမနှငျ့ ဒရိုကျဘာတို့လိုးနတောမွငျလိုကျရသညျ.. (ဖွူတုတျနှငျ့မဲကွီးဖွဈသညျ..အပိုငျး၂တှငျ ဖတျရှုနိုငျသညျ). . ..အိမျအတှငျးတနရောတှငျပုနျးနလေိုကျသညျ..၉..နာရီမှာဒျေါမွသညျအပျေါထပျမှဆငျးလာ၍..ခွံတံခါးသှားဖှငျ့ လသေညျ.. ..ဒျေါမွ ဂါဝနျအပါးဝတျထားသောကွောငျ့ နို့ကွီးနှငျ့ဖငျကွီးမြားမှာမွတျကသေီအောငျလို ကွညျ့ကောငျးလှသညျ.. ..အပျေါပွနျတတျသှားသော ဒျေါမွနောကျတိတျတိတျလေးလိုကျ၍.. “ဟိတျ..မမ..” “အမလေး”. . “မောငျလေး..မမလနျ့လိုကျ ထှာ..ဝငျလာတာမကွားရဘူးနျော..သူသိပျတျောတာပဲ” …ဒျေါမွ၏နို့ကွီးနှဈလုံးကိုအားရပါးရဆုတျကိုငျလိုကျပီး.. “အိမျမှာဘသူ တှရှေိသေးလဲမမ..တျောကွာသူမြားဒေ ကွားရငျ ရှကျစရာကွီး” .”အိမျဖျောလငျမယားပဲရှိတယျ.ခနစောငျ့တခုခုဝယျခိုငျးလိုကျမယျ အာ့မှ အလှတျကဲလို့ရမှာ..ချ..ချ..”
..ဒျေါမွအူမွူးနသေညျအသတျခံရမှာမသိခဲ့ပေ..အခနျးပွငျထှကျသှားလိုကျပီး. “ဟဲ့..မဲကွီးရမေဲကွီး..ဒနျပေါကျသှားဝယျစမျးငါ ဗိုကျဆာလို့”.ဟုအျောပွောလိုကျလသေညျ.. ..ထိုအခါအောကျထပျမှ “ဟုတျ မမကွီး” ဟု အသံကွားပီးနောကျ..ဒျေါမွ ပွုံးပွီးပွနျ ဝငျလာလသေညျ… ..”မမရစေရအောငျမောငျလေးထနျနပေီ.” ..တုတျကွီးရဲ့လီးနရောကိုဒျေါမွလကျခလေးနဲ့ အသာအုပျကိုငျပီး နောကျ… “မောငျလေးဟာ အရငျပွကှာ ကိုငျခငျြတယျ..” မောငျတုတျဘောငျးဘီရှညျကိုခြှတျခလြိုကျရာ…ဂျေါလီစကွာ နှငျ့၈လကျမလီးကွီးက မတျထောငျလာတော့သညျ.. ..”ဟငျ..ဒါဘာတှလေဲ..ကွောကျစရာကွီး ဒါ..ဒါနဲ့ မမကိုလိုးရငျ နာမှာပေါ့”. . ဒျေါမွလနျ့သှားပီးစကားမြားပငျထဈနတေော့သညျ… ..”မကွောကျနဲ့မမ စမျးကွညျ့လိုကျ အရမျးကောငျးတာ မမသိစရေမယျ..” ဒျေါမွကိုဆှဲဖကျ၍ ကဈဆငျဆှဲကာ.. စောကျဖုတျကလိပေးလိုကျသဖွငျ့… ငွိမျကသြှားလသေညျ..ထိုနောကျ ကုတငျ စောငျးမှာ လှဲခလြိုကျရာ ကိုယျလုံးမှာ ကုတငျပျေါပကျလကျဖွဈပွီး ခွထေောကျမှာအောကျတှဲလောငျးဖွဈနသေညျ…ခွထေောကျကို ဖွဲကားလိုကျပီး.. ပွဲအာနသေောအဖုတျတှငျးလီးကို တကေ့ာ..ဒျေါမွလကျနှဈဖကျကိုခြုပျထားလိုကျသညျ….
..ဒျေါမွလှုပျလိုမရတော့..လီးကိုအားကုနျစောငျ့လိုးထညျ့တော့သညျ… ဗွဈ ဒုတျ အား..အား..အူး…အျောသံမထှကျအောငျပါးစပျ ကိုဖိပိတျလိုကျပီး..ထပျဆောငျ့သညျ လီးကကွီးသလို ဂေါလီမြားကွောငျ့အဖုတျမှာ ပွဲကှဲကာသှေးမြားထှကျလာတော့သညျ.. “ဒျေါမွ..ခမြား မှတျမိလား ကြုပျက မောငျမောငျတုတျလခေဗြားတို့ကြုပျမိဘတှကေိုသတျပီးပွေးသှားတာ..ခုပွနျပေးဆပျရမယျ”. . ဒျေါမွလနျ့ဖွနျ့သှားပီးရုနျးကနျလတေော့သညျ မရပါ..ဆှဲမှောကျ၍ စအိုကိုထပျလိုးသဖွငျ့သှေးထှကျပွနျလသေညျ. “ငါ တောငျးပနျပါတယျဗီဒိုထဲမှာစိနျတှရှေိတယျပွနျယူသှားပါနျော”. . “မယူဘူး ခမြားသရေမယျ”ဟုဆိုကာ ခပျကွမျးကွမျးထပျ ဆောငျ့လိုကျ၏.. .ဒျေါမွအားကုနျသုံးအျောသဖွငျ့ ဂုတျကိုအိပျဆောငျဓားဖွငျ့ထိုးလိုကျရာ..
သလေသေညျ….ထိုနောကျ ဒျေါမွ ဗီဒိုမှစိနျမြားကိုယူ၍ကွမျးပျေါကွဲခလြိုကျပီး..ဘောငျးဘီအတှငျးမှ..သူ၏လကျရာမွောကျ ဂျေါလီလေးကိုထုတျယူကာ စိနျမြားနှငျ့ ရောထားလိုကျလသေညျ.. “ဆားပုလငျးမွမောငျရေ.ခမြားမကျြစိလြှငျရငျ ကြုပျကိုလာရှာ ပါ”. .. ဟုပါးစပျမှရှတျနစေဉျ..အောကျထပျမှလူတကျလာသံကွား၍…ပွတငျးမှခုံဆငျးထှကျပွေးလတေော့သညျ… ..အပိုငျးမြား ကို အစဉျလိုကျဖကျရှုလငျြ. သငျသိပါလိမျ့မညျ… …..ပွီးပါပွီ။… ….ကြေးဇူးတငျပါသညျ…
ကိုမြမောင်တယောက် မင်းကြီးဆမြူရယ်ကို မြေနိုးအဖြူကောင် ယီးပဲကွာ..ဟုဆဲဆိုမိ၍..ရန်ကုန်တာမွေဂတ်မှာ..တာဝန်ကျနေရာ မှ..သာယာဝတီနယ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခံလိုက်ရသည်.. ဖြစ်ပုံကဒီလို..ကိုမြမောင် စနေ တနင်းဂွေ ဆိုရင် အလုပ်ပိတ်သဖြင့်တာမွေး ဈေးအနီး.. ဖာဂေါင်းထွန်းကြည်အိမ်မှာအချိန်ဖြုန်းတတ်သည်..ဖာဂေါင်းထွန်းကြည်မှာ ကိုမြမောင်၏ ဆက်သား(spy). .ယခု ခေတ်အခေါ်..ထောက်လှန်းသတင်းပေးသူဖြစ်ပေသည်.. ထိုအပါတ်က ထွန်းကြည်ထံမှခဲခြစ်စာတခုရရှိသည်.. စာထဲတွင်.. ကို မြမောင်ခများ..အညာထန်းသီးအသစ်တွေရမယ်လာယူပါဟု..ရေထားသည် …ကိုမြမောင် ထိုစာကြောင့် အရမ်းပျော်သွားလေ သည်… အညာထန်းသီးဆိုသည်မှာ..အညာသူဖာအသစ်ရောက်ရှိသည်..လာဘွတ်ပါဟု.. အဓိပ္ပါယ်ရလေသည်…
ဖာကောင်းထွန်းကြည်သည်..အသစ်ရောက်တိုင်း..ကိုမြမောင်ကိုအရင်ကျွေးပီးမှ.. အရာရှိများ သထေးများဆီသို့တဆင့်ဈေးကွက် တင်သူ.ဖြစ်သည်… ..ထို့ကြောင့်ထွန်းကြည်အိမ်သို့အစောကြီးရောက်နေလေသည်.. “ဆရာသမားရေ အခန်းထဲမှာ ထန်းသီးရှိ တယ်ဝင်စားပေတော့.. စားပီးရင် အမောဖြေဖွာဖို့ ငါးသုံးလုံးစီးကရက်လေးလဲ အသင့်ပါဗျ.” ထွန်းကြည် မှာစရာရှိမှာပီးအပြင် ထွက်သွားလေသည်.. ကိုမြမောင် သည် ခန်းစည်း အဖြူလေးကာထားသော ဆယ်ပေးပတ်လည်အခန်းလေးထဲဝင်သွားသည်… နက်မှောင်နေသောဆံကေသာကို ဖြေလျော့ထားပီး သူ့ကိုကျောပေးကာထိုင်နေသော လုံးကြီးပေါက်လှ အမျိုးသမီးငယ်လေးကို တွေ့လိုက်ရသည်. မြမောင်မှာ စုံထောက် နယ်ထိန်းဖြစ်၍ အနားသို့ချက်ချင်းမကပ်ပဲ..
“ရှေ့က ညမလေး ဒီဘက်လှည့်ပါလား ကော်ရီး ကြည့်ချင်လို့ပါ” “ရှင်က အင်မတန် စေ့စပ်သားပဲ.. အနားကပ်မလာပဲ အဝေးက လှမ်းမေးနေတယ်.. သတိဆိုတာပိုတာမရှိဘူးဆိုတာ.. ရှင်နဲ့တွေ့မှယုံတော့တယ်” မိန်းခလေးမှာ မြမောင်ဘက်လှည့်လေသည်.. ရွှန်းလဲ့သောမျက်ဝန်းနှင့်အတူ ရွှေအိုရောင်လိုမှုန်းတဲ့အသား.. လည်တိုင်ကျော့ရှင်းလှပပီး… ဇာအင်းကျီးလေဝတ်ထား သဖြင့်.. အနက်ရောင်ဘော်လီဝတ်ထားတာမြင်ရသလို..ရင်သားနှစ်ဆိုင်မှာပြည့်တင်းစွာ လျှံ့ထွက်နေလေသည်..နှာတံ သွယ်၍နှုတ်ခမ်းလေးများ နှင်ဆီဖူးသဖွယ် စိုအိနေလေသည်.. မြန်မာဆန်ဆန်မိန်းမထိုင် ခြေသလုံးကွေးလေးထိုင်နေသဖြင့် တင်သားဆိုင်က ကော့ထွက်နေလေသည်.. “ကျမနာမည် ခင်ခင်လေးပါ..ကျမအဖေကရေနံချောင်းကဆန်စက်သထေး ဦးဘ ကလေး ပေါ့” “အိုး..မိုင်ဂေါ့..သထေးသမီးပဲဘာလို့ထွန်းကြည်ဆီရောက်ရသလည်းဗျ..ဒါကဖာချတဲ့နေရာလေ..မခင်လေးနဲ့မ သင့်တော်ဘူး”
“ကျမ သိပါတယ်ကိုမြမောင်..ကျမအဖေက.. ရာထူးဥစ္စာ အရမ်းမက်ပီး..ကျမကို.. အဖြူကောင် နဲ့ပေးစားမလို့လုပ်နေလို့. ထွက်လါတာပါ..ကျမ အပျိုရည်ကို.. အလကားမဖြစ်စေရဘူး..ဒါကြောင့် ရှင့်လိုနိုင်ငံကျော်စုံထောက်ဆီမှာအရင်ခံပီးမှ အဲ့အဖြူ ကောင်ကိုယူမှာပါ..” မြမောင် ဘဝင်မြင့် တတ်သူမဟုတ်ပါတည်တည်ငြိမ်နှင့်.. “အဲ့တော့ ရန်ကုန်ကိုအလည်သွားမယ်လို့ညာပီး ကျုပ်ဆီလာတွေ့တယ်ဆိုပါတော့” “အမှန်ပါပဲ..ရှင်နဲ့အတူအိပ်ပီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်မယ်..ရှင့်သွေးသားကိုလိုချင်လို့ပါ” “ဟုတ်ပါပီ အမိ စကြရအောင်..” မြမောင် လက်မြန်သူဖြစ်၍ သူ၏ ဘောင်းဘီရှည်နှင့် ကုတ်အင်းကျီကိုချွတ်ချလိုက်သည်.. ၈ လက်မခန့် လီးကြီးမှာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြင့်ပေါင်နှစ်ခုကြားတွဲလဲခိုနေသည်.. မခင်လေးမှာ မတ်တပ်ရပ်နေသော မြမောင် အရှေ့ရောက်လာ ပီး ဒူးထောက်ထိုင်ကာ လီးကို လက်နှစ်ဖက်နှင့်ဆုတ်ကိုင်ပီး ဒစ်ထိပ်ကို စတင်၍ စုပ်လိုက်သည်..
ထိုခေတ်အခါက ပုလွေပေးတာ လူတိုင်းမသိပေ..ခင်ခင်လေးမှစတင်၍ ပြုလုပ်သဖြင့် ခေတ်အဆက်ဆက်ဖာများ လက်ဆင့်ကမ်းကာ အိမ်ထောင်သည်များအထိ ပြန့်ပွားလာခဲ့သည်.(နောက်အပါတ်တွင် ပုလွေမယ်တော် ခင်ခင်လေး အကြောင်း တင်ဆက်မည်ဖြစ်၍..#ရွှေကြာမြိုင် ပေ့ ကို like follow လေးလုပ်ထားဖို့မမေ့ကြနဲ့နော်). . ကိုမြမောင် လီးစုပ်မခံဖူးပေ အလိုးသက်တမ်းကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့ယခုမှအစုပ်ခံ အမှုတ်ခံရဖူးသည်.. ကောင်းလေစွ..ခင်လေးမှာ အင်မတန်ညင်သာလှပေသည်.. လီးကိုစုပ်နေရင်း လဥများကို ဖွဖွလေးနှိပ်နယ် ပေးပြန်သည်.. ထို့နောက်လဥမှတဆင့်လီးအောက်ခြေ အကြောကို လျှာနဲ့ပွတ်ဆွဲလေသည်.. ထိုအတိုင်းဆို သုတ်ပမ်းထွက်နိုင် တာ.. ကိုမြမောင်ရိပ်မိလိုက်သည်..
“မခင်လေး ရပ်ပါတော့ ကျုပ်သုတ်ရည်တွေအလကားမဖြစ်ချင်ဘူး လိုးသင့်ပီလေ” “အကို့သဘောပါရှင် ကျမပက်လက်လှန်ရမ လား..” “အင်း မခင်လေးက ပထမဆုံးအကြိမ်အလိုးခံမှာဆိုတော့ ရိုးရိုးပဲလိုးကြမယ် တချီပီးမှပုံစံပြောင်းကြမယ်” အဝတ်အစား များချွတ်၍ မခင်လေး ခလေးမွေးခါနီးမိန်းမများလို ပေါင်ကားပေးလိုက်သည်.. ရှောက်သီးလုံးအရွယ်နို့သားကြီးများမှာကိုင်ရက် စရာမရှိအောင်လှပလွန်းသည် အနက်စောက်မွှေးများမှာ ဆီးခုံအလယ်မှစ၍ အပေါ်သို့ ညီညာစွာ ထောင်နေလေသည်..(ပန့်ကေ ပုံစံဖြစ်သည်). .အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားများမှာ.. စိနေသည်..တရုတ်မများလက်တိုဝတ်ပြီးလက်တွဲလောင်းချလျင် သင်ကြည့်ကြည့်ပါ ဖွေးဖွေးစိနေပီး V ရှိတ်ပုံစံဖြစ်သည်.. ကိုမြမောင် လီးတဝက်ကိုကိုင်၍ အဖုတ်ဝကို ဖိချလိုက်သည် မဝင်နိုင်ပါ အပျို အစစ်မို့တင်းခံနေသည်..
“မခင်လေး လက်နဲ့အဖုတ်ကိုဖြဲပေးထားပါ အပေါက်က အရမ်းသေးနေတယ်” မခင်လေး လက်ချောင်းများဖြင့်ဖြဲပေးသောအခါ လက်ညိုးဝင်ရုံအပေါက်လေးပေါ်လာသည်.. ကိုမြမောင် တံထွေးကိုလီးမှာ သုတ်လိုက်ပီး အားပိုသုံးကာထိုးသွင်းလိုက်သည်.. ဗြိ..ဗြစ်..အိ..အီး… ဒစ်ဝင်သွားသည်..တံတွေးကို လီးမှာထပ်သုတ်လိုက်ရာ..ဒုတ်..အ.. ဝင်သွားပီ မခင်လေး လိုးမယ်နော် နာ ရင်အောင့်ခံပါ.. “ကျမခံနိုင်တယ်ကိုမြမောင်စိတ်ရှိသလိုလိုးပါ” အင်မတန်ပြတ်သားသောမိန်းမဖြစ်ပေသည်.. လီးကြီးနှင့် ပါ ကင်ဖောက်ခံရနေသော်လည်းလုံးဝမအော်ပေ.. လှေကြီးထိုး လိုးပေးလိုက်ရာ သုတ်ရည်များ သားအိမ်ထဲဝင်သွားလေသည်.. မ ခင်လေးဗိုက်အတွင်းမှ ခပ်နွေးနွေးအရသာကို ခံစားလိုက်ရသည်.. ကောင်းလိုက်တာ ကိုမြမောင်ထပ်လိုးပါ.. “ကုန်းလိုက်ပါ မခင် လေး”
ဝင်းအိနေသောတင်သားဆိုင်များကိုဆုတ်ကိုင်ပီး အနောက်မှဆက်တိုက်လိုးလိုက်ရာ အရည်များဆက်တိုက်ထွက်၍ မခင်လေးပီး လေသည်… ..ထိုစဉ်…”ဆရာသမားရေ..” ထွန်းကြည်အသံကျယ်ကြီးကြားလိုက်ရသည်.. “ဘာလဲဟ..အလန့်တကြားနဲ့..” “မင်းကြီး ဆမြူရယ်က ဆရာသမားကို အရေးတကြီး ရှာနေတယ်ဗျ လူသတ်မှုဖြစ်လို့တဲ့” ထိုအခါမခင်လေးက တချက်ပြုံးလိုက် ပီး “ကိုမြမောင် ကျမတို့ထပ်တွေ့ကြမှာပါ.. ရှင်လဲအလုပ်ပေါ်လာပီပဲ..သွားလိုက်လေ ကျမစောင့်နေပ့မယ်” လီးရှိန်က ခုထိမ သေသေးပေ..လိုးလို့ကောင်းနေကာမှ..ဒီမြေနိုး လာနှောက်ယှက်နေတယ်.. “အေး..ငါအခုလာခဲ့မယ် လို့သတင်းပို့လိုက်”. .. မြ မောင် မခင်လေးကို နှုတ်ဆက်လိုက်ပီးတာမွေဂါတ် မင်းကြီးဆမြူရယ်ဆီ ထွက်သွားလေသည်… ဂါတ်တဲသို့ရောက်သောအခါ.. လက်အောက်ငယ်သားများကို..
အင်းဂလိပ် မြန်မာလိုဆဲဆိုနေသော ဆမြူရယ်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်.. ကိုမြမောင် တင်းပီးဝင်သွားလိုက်သည်.. “ဟာ လူကလေး မြမောင် ဘယ်တွေသွားနေတာလည်း..ကျုပ်ခဗျားကိုလိုအပ်နေတယ်”. . “ကျုပ်ဟာကျုပ် ဘယ်သွားသွားခများစောက်ပူပါလား.. အခုပိတ်ရက် ခဗျားနားမလည်ဘူးလား.” “ပြန်မအော်နဲ့လူကလေး မင်းနယ်ရောက်သွားမယ် နားလည်လား” ထိုအခါ ဆာပုလင်း မြမောင် က အင်မတန်ပီသသော အင်းဂလိပ်အသံဖြင့်. ….”ငိုးမ…မြေနိုး..လီးပဲလေ”. .ဟုပြန်ဆဲလိုက်ရာ..မင်းကြီးမျက်နှာနီရဲသွား ပီး… …”မင်းအခု ချက်ချင်း သာယာဝတီကိုပြောင်းစေ”. ဟုအမိန့်ချလေသည် ကိုမြမောင်၏နာမည်ကျော်ကြားမှုကြောင့်သာယာဝ တီနယ်မှလူဆိုးသခိုးများကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် ငြိမ်သက်သွားသည်.
ထို့ကြောင့်သူလဲအားယားနေပီး.. အကြမ်းရေလေးသောက် ဂွင်းထုလိုက်နှင့်သာယာနေလေသည်.. …တနေ့မနက် ကိုမြမောင်ထံ စာတစောင်ရောက်လာသည်…ထိုစာမှာ.. မင်းကြီး ဆမြူရယ်မှာအမျက်တော်ပြေ၍ တာမွေဂါတ်သို့ပြန်လာရန်ခေါ်စာဖြစ်သည်.. ….ကိုမြမောင်သိပါသည်..သူရန်ကုန်မှာမရှိလျင်..မြေနိုးလူဆိုးများထကြွနေကြမှအမှန်ပင်…ထို့ကြောင့်ရန်ကုန့်သို့ လှည့်ရပါ တော့သည်… …….. …..ဗဟန်း ရေတာရှည်လမ်း ရတနာပွဲစား ဒေါ်မြမြ အိမ်ရှေ့တွင် သတင်းထောက်များစုရုံးရောက်ရှိနေကြ သည်..ပုလိပ် များက ခြံတခါးဝ မှာစောင့်ကြပ်နေကြသည်.. မဟူရာရောင်ဆေးခြယ်ထားသောထိုအိမ်မှာကြီးမားလှပေသည်.. အပေါ်ထပ်အောက်ထပ်ပြဿဒ်ကနုတ်များပြုလုပ်ထား၍အိမ်ရှင်ဒေါ်မြမှာလူကုန်ထန်တဦးမှန်းသိသာလေသည်.. ..အိမ်ရှေ့ဧဲ့ခန်း ကျယ်မှာ ဒရိုက်ဘာ မဲကြီးနှင့် အိမ်ဖော် ဖြူတုတ် တို့ကို.. ပုလိပ် စိန်ဝင်း က စစ်ဆေးမေးမြန်းနေလေသည်..
“”မင်း ညနေက ဘယ်ရောက်နေလည်း” မဲကြီးမှာ ကြောက်ဒူးတုန်ပီး.. “ဒေါ်မြက ကြက်လျှာစွန်းဒံပေါက်စားချင်တယ်သွားဝယ် ပါ ခိုင်းလို့ သွားနေတာပါ”. . “ဟုတ်ပီ..ဟဲ့ဖြူတုတ် နင်ကရောဘာလုပ်နေလဲ..” အိမ်ဖော်ဖြူတုတ်မှာ မျက်နှာငယ်လေးနှင့် “ကျမ အခန်းထဲမှာ အိပ်နေတာပါ.. ဒေါ်မြအော်သံကြားလို့ သူ့အခန်းကိုသွားဖွင့်ကြည့်တာပါ.. အဲ့ချိန်မှာ ဒေါ်မြသေနေတာပါ… အီး..ဟီး..ဟီ.”. . “မဲကြီး..ဒံပေါက်ဝယ်တယ်မဟုလား.. ဘယ်မှာလည်း ဒံပေါက်” မဲကြီး ကြောက်လန့်မှုက အထွတ်အထိပ် ရောက်လေပီ.. “ကျနော်ပိုက်ဆံအိတ်ယူဖို့မေ့လို့ပြန်လှည့်လာတာပါ ကျနော်မသတ်ပါဘူးဗျ.. အီး..ဟီး..” မဲကြီးငိုချလေသည်..
“တိတ်ဇမ်း..ပုလိပ်တွေ အဲ့ကောင့်ကိုဖမ်းလိုက်တော့ ဒီကောင်သတ်တာ” “ဖြူတုတ် င့ကိုကယ်ပါအူးဟ” ဖြူတုတ်လဲဘာမှ မတတ်နိုင်ငိုကြွေးတော့သည်…မဲကြီးလက်ထိပ်ခတ်ထားခံရစဉ်မှာ… …ကောင်းဘွိုင်ဦးထုပ်ကိုဆောင်းထား၍ ကုတ်အင်းကျီးအ ရှည်ကြီးကိုဝတ်ထားပီး နက်ပြောက်နေသော ရှူးဖိနပ်စီးထားလျက် စမတ်ကျကျရနေသော လူတယောက်ဝင်လာလေသည်.. “ဟာ..ကိုမြမောင်..ခဗျားလာတာနောက်ကျပီဗျ..ကျုပ်တရားခံမိပီ.အဲ့တာမဲကြီးပဲ” စိန်ဝင်း တယောက် အောင်မြင်သောအသံကြီး နှင့် ကြွားဝါနေလေသည်… ကိုမြမောင် မှာ စိန်ဝင်းကို စောက်ဖက်မလုပ်ပဲ..ကြမ်းပြင်ပေါ်ထိုင်ငိုနေသော ဖြူတုတ်မ အနားသွား၍.. “ညမလေး..ကော်ရီးမေးစရာရှိလို့.. ခဏလိုက်ခဲ့ပါ..” ကိုမြမောင် သည် ဖြူတုတ်ကိုခေါ်၍.. လူသတ်မှုဖြစ်ရာ အခန်းသို့ ဝင် သွားလေသည်.. မြကတီပါမွေ့ယာကုတင် စောင်းမှာ ဖင်ကုန်းလျက် သေနေသော ဒေါ်မြကိုတွေ့ရသည်..
လွန်ခဲ့သော မိနစ်၃၀မှာ အသတ်ခံရ၍ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ရှိသေးသည်.. အသတ်ခံရပုံမှာ လည်ဂုတ်တွင် ၆လက်မအရွယ်ဓား စိုက်ခံရပီး.. စအိုဝနှင့် အဖုတ်များမှာ သွေးထွက်လွန်သေနေခြင်းဖြစ်သည်.. ဒေါ်မြသည် ၄၅ နှစ်အရွယ်ချောမောလှပပီး ကျွဲကောသီးအရွယ်နို့သားကြီးများရှိသလို ဖြူဖြူကိတ်တိတ် တင်သားနှင့် အရပ်မောင်း မြင့်သော မိန်းမတယောက်ဖြစ်သည်.. လင်သားမရှိသားသမီးမရှိ ကာလသားတိုင်းလိုးချင်နေသောအကိတ်မဖြစ်သည်.. ဖြူတုတ်မှာ အလောင်းကိုမြင်ပီး.. ”အမလေး မမကြီးရယ် အလိုးခံပီးသေရတယ်လို့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေးဟု အော်ကာငိုပြန်သည်… ကြမ်းပြင်အထက်မှာ မြေပဲစိအရွယ်စိန်များပြန့် ကြဲနေကြသည်..ကိုမြမောင် တယောက်ထိုစိန်များအတွင်းမှ ပစ္စည်းတခုကိုကောက်ယူလိုက်ပီး.. နှုတ်ခမ်းမဲ့ကာပြုံးလိုက်လေ သည်.. ကုတ်အတွင်းစီးကရက်ဘူးမှ တလိပ်ဆွဲယူ မီးညှိရှိုက်ဖွာကာ..
“ညမလေး..က မဲကြီးနဲ့ လိင်ဆက်ဆံထားတာမကြာသေးဘူးမလား”. .ထိုသို့မေးခြင်းကြောင့် ဖြူတုတ်လန့်သွားလေသည်..ဒါပေမဲ့ မဖြေ.. “နင် မဖြေရင် မဲကြီး တသက်တကျွန်းထောင်ကျလိမ့်မယ်.. ဖြေပါ..”ထိုအခါမှ..ဖြူတုတ်က သက်ပြင်းရှည်ချပီး.. “ဟုတ် ပါတယ်..ကျမတို့အခန်းမှာ..ဆက်ဆံနေတာပါ”. . “ကျုပ်ဘလိုသိလဲ မေးချင်တယ်မဟုလား. နင့် ထမီနောက်မှာ အရေတွေထွက် ပီးကွက်နေတယ်လေ.. လိုးတာမကြာသေးလို့ပေါ့ဟ..နင့် အခန်းကို သွားကြတာပေါ့..အဲ့မှာဆက်ပြောကြမယ် ကျုပ် ကိုသိမျှ အကုန်ပြောပါ..နင့်ဘဲမဲကြီးကိုငါပဲကယ်နိုင်တယ် okလား”. . “ဟုကျမနောက်ကလိုက်ခဲ့ပါ.” မြမောင်နှင့်ဖြူတုတ် ဒေါ်မြအခန်းမှ ထွက်၍ အောက်ထပ်ဖြူတုတ်အခန်းဆီသွားကြသည်.. ပုလိပ်များနှင့်စိန်ဝင်းတို့တသိုက် အလောင်းသိမ်းရန် ပြင်ဆင်နေကြ၍ သူ တို့နှစ်ယောက်ကိုသတိမထားမိပေ..
ဖြူတုတ် နာမည်နှင့်လိုက်အောင် ဖြူဖြူတုတ်တုတ်ဖြစ်သည် ခါးသေးသေးလေးမှာပန်းရောင်ထမိန် ခပ်ကြပ်ဝတ်ထား၍တင်သား မှာ အယ်ထွက်နေသည် လိုးနေချိန်မှာ အမှုဖြစ်၍ အတွင်းခံဝတ်မထားပဲ လာကြည့်ပုံရသည် အရေအကွက်လိုက်ပေါ်တာ သတိမ ထားမိပေ၊ ဖြူတုတ် အခန်းထဲဝင်စဉ် မြမောင်ကလိုက်ဝင်ပီးတခါးမင်းတုံးကိုချလိုက်လေသည်.. “ကဲ..ဖြူတုတ် ကုတင်မှာ ထိုင် ပါ..ငါစမေးမယ်… မဲကြီးလီးက ဘယ်လောက်ကြီးလဲ..” “ကျမ မပြောတတ်ဘူးရှင့်..မတိုင်းကြည့်ဖူးဘူး.” “ဟုပီ..ငါပွမယျ”. ဟု ဆိုကာ.. မြမောင်က ဘောင်းဘီဇစ်ကိုဖြုတ်ချ၍ သူ့လီးကိုထုတ်ပြလေသည်.. ၈ လက်မ စော်ကြည်လီးကြီးမှာအကြောအထစ် ထစ်နှင့် အမြောင်းလိုက်ပေါ်လာလေသည်”. “အို..ရှင်..ဘာလုပ်တာလဲ”
“ငါမေးတာ ဖြေပါ ငါ့လီးလောက်ကြီးလား” “ရှင်က..နာမည်ကြီးစုံထောက်ဖြစ်ရုံမက. လီးပါ ပြိုင်စံရှားပဲ..ရှင့်လီးတဝက်ပဲမဲကြီး ကရှိတာပါ” “သေးလားကြီးလား..သိအောင်ကိုင်ကြည့်ပါ.ဖြူတုတ်.” မြမောင် ဖြူတုတ်မျက်နှာရှေ့လီးကို တိုးကပ်လိုက်ပီး..ပြ လေသည်.. ဖြူတုတ် တံထွေးများမြိုချလိုက်ပီး.. လီးကိုကိုင်ကြည့်လေသည်.. “မဲကြီးဟာက သေးပါတယ် ရှင့်ဟာက လက်ထဲ မှာပြည့်ရုံမက ထိပ်ဒစ်ကြီးပါအယ်နေတာ.” “နင် ဂေါ်လီသိလား” “ဟုတ်သိပါတယ် ပီးခဲ့တဲ့တပါတ်က.. ကျမ က မဲကြီးကို ပြော တယ် ရှင့်လီးကသေးတယ် ခံလို့မကောင်းဘူး ကြီးအောင်လုပ်လိုက်ပါ ပေါ့..ဒါကြောင့် သူ အပြင်မှာ ဂေါ်လီထဲ့လာပါတယ်” “အဲ့ တော့ ဆက်ပြောပါ.” ဖြူတုတ်မှာ မြမောင်လီးကို ရမက်ထန်ထန်ကြည့်နေလျက် ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် ဂွင်းထုနေမိသည်..
“သူဂေါ်လီထည့်လာတာ ဒီနေ့တပါတ်ပြည့်တာပါ ဒါကြောင့်စမ်းလိုးကြည့်နေတုန်း ဒေါ်မြခေါ်သံကြားတယ်”. ဒေါ်မြက ဒန်ပေါက် စားချင်တယ်ဝယ်ပေးပါပြောလို့ သူက ဟုတ်ကဲ့ ပြောပီး..အပြင်ထွက်ဟန်ဆောင်တယ်..” တကယ်တော့မသွားပါဘူး..နောက်ဖေး အပေါက်ကပြန်ဝင်ပီး..ကျမတို့ဆက်လိုးနေကြတာပါ..” “ဂေါ်လီနဲ့လိုးတာ ကောင်းလား..” “မကောင်းပါဘူးရှင်..အဖုတ် နှုတ်ခမ်းသားတွေနာ လွန်းလို့ ကျမ မပီးနိုင်ပါဘူး” ဖြူတုတ်ပြောပြတာနားထောင်ရင်း မြမောင်လီး ထိပ်အရည်ကြည်များထွက်နေ လေသည်..ဖြူတုတ်လက်ညှိုးလေးနဲ့ထိုအရေကြည့်ကို ထိလျက် ဒစ်ထိပ်ညိုကို ပွတ်နေပြီး.. “မြမောင် ကျမကို ဖင်ကုန်းခိုင်းပီးလိုး ပါတယ် သူ့သုတ်ရည် တွေထွက်တဲ့အထိပဲ..အဲ့အချိန် ဒေါ်မြအော်သံကြားလို့ ကျမတို့လိုးတာရပ်ပီး..ဒေါ်မြအခန်းဆီသွားတာ ပါ..အဲ့မှာ ဒေါ်မြသေနေပီ”. .
“ဟုပီ..နင် အမှန်ပြောတာငါလက်ခံတယ်.. မဲကြီး အပြစ်မရှိတာ ငါကူညီမယ်.. နင်က င့လီးနဲ့လိုးတာတော့ခံရမယ်”. . … ..ဖြူ တုတ်မှာတကောင်ကြွက်မဖြစ်သည် မဲကြီးသာ သူ့ဘဝအဖော်ဖြစ်သည်..မဲကြီးထောင်ကျလျင် သူ့ဘဝ ရေစုံမြောရပေတော့မည်.. အဖြစ်မခံနိုင်ပါ..ခုကယ်တင်ရှင်တွေ့ပီလေ ပီးတော့ ပြိုင်စံရှားလီးမျိုး နှင့်မခံလိုက်ရလျင် နှမြောစရာဖြစ်ပေမည်… “ဟုတ် ဆရာကြီး ရှင်လိုးပါ ပီးရင် မဲကြီးကို ကယ်တင်ပါရှင်..” မြမောင် ခင်ခင်လေးနဲ့ လိုးစဉ်အခါက လီးစုပ်တာခံဖူး၍ သတိရလိုက် သည်.. “အရင်ဆုံး င့လီးကို စုပ်ပါ ရေခဲချောင်းစုပ်သလိုပေါ့..ပီးရင် လဥကိုညင်ညင်သာ နှိပ်နယ်ပေးပါ.. အဲ့တာ ပီးရင် မဲကြီးလိုး သလို ဖင်ကုန်းလိုးပေးမယ်” ဖြူတုတ်စစုပ်ပါတော့သည်..မြမောင်သင်ပေးတဲ့အတိုင်း တခုမှမမှားအောင် လုပ်တော့သည်.. အာဂတွင်းနွေးနွေးကြား ဝင်ထွက်နေသောဒစ်ကြီးကိုစုပ်ရတာအားရှိလှသည်.. ပြွစ်ပြွစ်..အွင်း..ဘလွတ်… မြမောင် အကြိုက်တွေ့ နေပီ.. “ရပီ..ကုန်းတော့.. ထမိန်လှန်ထား” ကုတင်စောင်းဘေး လက်ထောက်ကုန်ထားသောဖြူတုတ်ဖင်ကြီးမှာ အယ်ထွက် နေသည်..
ဖြူတုတ်ခါးကို ဖိချလိုက်ပီးကော့တတ်လာသော ဖင်သားကြီးအောက်မှ စောက်ဖုတ် ကြီးအရည်ရွှဲ၍ အလိုးခံဖို့အသင့်ရှိနေသည်.. မြမောင်အချိန်ဆွဲလို့မဖြစ် တရားခံဖမ်းရအူးမည်… လီးကို အဖုတ်ဝတွေ့၍ လိုးပါတော့သည် ဘွတ်..ဘွတ်..ဗြိဗြိ…အ့..ရှီး.. စ ပတ်အတွင်း တင်းကြပ်ဝင်လာသောလီးကြီးကိုစပအတွင်းနရံနှင့် ညစ်ကာ ပေါင်ကိုစိပေးလိုက်သည်.. မြမောင် လက်များ ဖြူ တုတ် နို့များကိုလှမ်းညစ်လိုက်ပီး..အချက်မှန်မှန်လိုးတော့သည်.. ကောင်းလိုက်တာ..ရှင်ကြီးရယ်..မဲကြီးထက်အစတရာသာ တယ်..လိုးပါ မရပ်ပါနဲ့ ကျမ ပီးတော့မယ်” “ဂေါ်လီနဲ့လီးကြိုက်လား င့လီးကြိုက်လားပြောစမ်း” တင်သားများကို လက်ဝါးနှင့် တဖြန်းဖြန်းရိုက်ပီး.. လိုးမေး..မေးတော့သည်.. “ရှင့်လီးကောင်းတယ်..အ့..အ့..” ဘွက် ဘွက်..အရည်များပမ်းထွက်ကြလာ သည်..မြမောင် လီးကိုဆွဲထုတ်၍.. “ဟဲ့ နင်ပီးပီမဟုတ်လား..ဒီဘက်လှည့်လီးပြန်စုပ်တော့…” ဖြူတုတ်ကြမ်းမှပြန်ထိုင်၍ လီးကို အဆက်မပြတ် ပြန်စုပ်တော့သည်..
ပြစ်….ပြစ်…ပြစ်.. “အ့..ငါ သုတ်လွှတ်တော့မယ်.စုပ်စုပ်… အီး….” ဖြူတုတ်ခေါင်းကိုဆွဲကိုင်၍ လရည်များအာဂေါင်တွင်း ပန်းထည့်လိုက်လေသည်… အဟွတ်..အဟွတ်.. ဖြူတုတ်ဘာမှမတတ်နိုင် မြိုချလိုက်ရာ.. အနည်းငယ်သီးသွားလေသည်.. “ကဲ..ပီးပီ..ငါလဲ တရာခံသွားဖမ်းရမယ်” မဲကြီး နောက်နေ့မှာ နင့်ဆီ ပြန်ပို့ပေးမယ် ဟုပီလား”. . “ကျေးဇူးကြီးပါပေ့..ရှင်ကြီး ရယ်.. ရှင်လိုးချင်ရင် ကျမဆီ အချိန်မရွေးလာခဲ့ပါ..ရှင့်ကိုစွဲသွားပီ”. . မြမောင် ဘောင်းဘီဇစ်ပြန်ပိတ်၍… “ဟဲ့ နင်အရေ တွေ သု တ်ပီး အနားယူတော့..ငါသွားပီ”. .. ….အိမ်ရှေ့ ဧဲ့ခန်းမ အတွင်း.. မင်းကြီး ဆမြူရယ်ရောက်ရှိနေသည်.. “ဟာ လူကလေးမြမောင် အလာနောက်ကျတာလား.ဒီမှာ စိန်ဝင်း က တရားခံမိနေပီ..ဟား..ဟား” ..မြမောင် ထိုသူများကို စောက်ဖက်မလုပ်ပဲ သတင်းသမားကြားကြည့်လိုက်ရာ.. ဖာဂေါင်းထွန်းကြည်ကိုတွေ့လိုက်၍.. “ကိုထွန်းကြည်ရေ..အချိန်နောက်မကျခင် တရာခံ သွားဖမ်းရမယ်..ခများလိုက်မှဖြစ်မယ်ဗျ”. .. “ဟုတ်ပါပီ..ဆရာသမားရေ..သွားကြစို့” ……ဤတွင် (ဆားပုလင်းမြမောင်နှင့် ဆယ် ဂေါ်လီတုတ်ကြီး) အမည်ရ သည်းထိတ်ရင်ခုန်ဖွယ် ဇာတ်လမ်းကြီးစတင် ဖြစ်ပေါ်လာလေသည်။
ကိုမြမောင်နှင့်တပည့်ကျော်ဖာဂေါင်းထွန်းကြည်တို့ အော်စတင်ကား လေးဖြင့် တရားခံဖမ်းရန်ထွက်လာကြလေသည်.. သိပ်မ ကြာပါ ကြည့်မြင်တိုင် ဟံသာဝတီဘူတာသို့ ရောက်ရှိလေသည် “ကိုထွန်းကြည်ရေရောက်ပီဗျို့သွားကြရအောင်” ..”ဟာ..ဆရာ သမား ဒါအနူတွေနေတဲ့နေရာလေဗျာ.. (ယခု အရိုးအထူးကုဆေးရုံ). . “ဟုတ်ပ..အဲ့မှာ ဂေါ်လီထဲ့ပေးတဲ့အိမ်ရှိတာ ခက်ဗျားလဲ သိတာပဲ..သွားကြရအောင်”. “ဆရာသမားပစ္စည်းက ကြီးပီးသားလေဗျာ..ဂေါ်လီထည့်အူးမလို့လားဗျ..ဟားဟား…” “ကဲ..နောက်မှပြောကြမယ်..တရားခံလွတ်သွားမယ်ဗျ..” ….နှစ်ထပ်အိမ်တခုဖြစ်သည်.. တံခါးဝရှေ့ရောက်သောအခါမြမောင် က သေနတ်ကို အသင့်ကိုင်ထားပီး..ခေါက်လိုက်လေသည်.. ဒေါက်..ဒေါက်..ဒေါက်.. “ဘာကိစ္စလဲရှင့်.” .လှပကျော့ရှင်းသော မျက်နှာကလေးနှင့် ရှိုက်ဖိုကြီးငယ် ပြည့်စုံသော မိန်းခလေးက တံခါးလာဖွင့်ပေးလေသည်…
“ခင်လေး..မတွေ့တာကြာပီနော်..မစ်နေတာ..ကျုပ် တုတ်ကြီးနဲ့တွေ့ချင်လို့ပါ.” “ရှင့် သေနတ်ကြီး ချလိုက်ပါရှင်..ရန်သူတွေမှ မဟုတ်တာ” ခပ်ချွဲချွဲလေသံလေးနှင့်သူမပြောနေသည်. ..ထိုစဉ် သူမနောက်မှ..ဒေါင်ကောင်းကောင်းနှင့်ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်သော ယောက်ျားတယောက် ထွက်လာပြီး.. “ဟာ..ကိုမြမောင်..ကျုပ်ထင်တာထက် စောပီးရောက်လာပါလား..ဂေါ်လီထဲ့မလို့လား ဗျ..ဟား..ဟား”. .ထိုသူမှာတုတ်ကြီးဖြစ်သည်.. ဘိုင်စကုတ်မင်းသားလို ခပ်နွဲ့နွဲ့အနေအထားရှိပေမဲ့..ဒီနယ်တခွင်မှာနာမည်ကြီး လူမိုက်ဖြစ်သလို လူသတ်ရန်ဝင်မလေးသောသူဖြစ်သည်.. “ကိုတုတ်ကြီး..အေးဆေးအဖမ်းခံပါဗျာ.. ခများကြောင့် အပစ်မဲ့တဲ့သူ ထောင်ကျတော့မယ်” အပြစ်မဲ့သူဆိုသည်မှာ အပိုင်း၁ မှ ဒရိုက်ဘာမဲကြီးကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်..
“ဟုတ်ပါပီ..ဒါနဲ့စကားမဆက် ကျုပ်သတ်တာဘလိုသိတာလဲဗျ”. . ..မြမောင်တချက်ပြုံးလိုက်ပီးအိပ်ကပ်အတွင်းမှ မြေပဲစိအရွယ် လက်ရာမြောက် ဖန်ဂေါ်လီလေးထုတ်ပြလေသည်.. “ဂေါ်လီ တခု တွေ့တာနဲ့သိရောလားဗျ”. . “ဟားဟား..ရန်ကုန်တဝိုက်မှာ..ဒီ လိုဂေါ်လီ လုပ်တာခဗျားပဲရှိတယ် ပီးတော့ ဒေါ်မြလေးသေတုန်းက စိန်တွေပြန့်ကျဲနေတယ်လေ..အဲ့ကြားထဲကကျုပ်ကောက်ရ တာ..ခများကလောဘသားမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျုပ်သိတယ်.. ဒါကြောင့် ဘာပစ္စည်းမှမယူပဲ ထွက်ပြေးသွားတာမဟုတ်လား”. .. …”ကဲ ဖမ်းပါတော့ဗျာ..” “ကိုထွန်းကြည် သူ့ကိုလက်ထိပ်ခက်ပီး ခေါ်သွားလိုက်ပါ..ဂါတ်ရောက်မှဆက်မေးကြတာပေါ့..ကျုပ်ခင် လေးကို မေးစရာရှိသေးလို့နေခဲ့မယ်”. …… ….ထွန်းကြည်မှာတုတ်ကြီးကိုခေါ်သွားပီနောက်..မြမောင် နှင့်ခင်လေး ကျန်ခဲ့လေ သည်… ခင်လေးမျက်ရည်လေးတွေဝဲနေသည်.. “စိတ်မကောင်းပါဘူး မခင်လေး..ခများနဲ့ကျုပ်ထွန်းကြည်အိမ်မှာ လိုးတဲ့နေက လူသတ်မှု ဖြစ်တာ ခများလည်းသိတာပဲ..ကျုပ်နယ်ပြောင်းရလို့..ခများအကိုတုတ်ကြီးကို မဖမ်းခဲ့ဘူး..
ခများက ကြံရာပါဆိုတာသိပါတယ်”. . ..ခင်လေး မျက်ရည်များကျပီး.. “ရှင် သိလား ကျမ အပျိုရည်ကိုရှင့်ကိုပေးပီးနောက်ပိုင်း.. ရှင့်ကိုအမြဲသတိရနေတယ်..အဲ့နေ့က.. ကျမတို့ရဲ့ရန်သူတွေကိုသတ်မလို့အကွက်ဆင်ပီးသားလေ..ရှင်က အဖမ်းအဆီးတော် လို့ ကျမအပျိုရည်ကိုရှင့်ကိုပေးပီး အကိုတုတ်ကြီးလူသတ်လို့ရအောင် စီစဉ်ခဲ့တာပါ ရှင် ဖမ်းချင်ရင်ဖမ်းပါ ကျမမငြင်းပါဘူး” မြ မောင်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပီး.. သူမပခုံးသားလေးကိုဆွဲကိုင်ကာ.. “ခင်လေးရယ် ဖမ်းစရာလား.ကော်ရီးက ခင်လေးကို..သတိရ နေတာပါ..ပီးတော့ ဒီနှုတ်ခမ်းရဲ့ စုပ်ချက်တွေကို လိုချင်သေးတယ်လေ”. .. မြမောင် သူမကို နှုတ်ခမ်းချင်းတေ့ပီးလျှာလေးနဲ့ မွှေ လိုက်သည်.. “အို…ကိုရယ်..ကျမ ခံချင်တယ် လိုးကြမလားဟင်” ခင်လေးမျက်ရည်များကြားမှ တောင်းဆိုလာသလိုခါးလေးကော့ ပေးပီး သိုင်းဖက် လာလေသည်..
အိမ်ရှေ့တွင် ထမင်းစား စာပွဲသာရှိသည်. ထိုစာပွဲပေါ် ခင်လေးကိုမတင်လိုက်သည်.. ရင်ဖုံးအင်းကျီလေးကို ကြယ်သီးဖြုတ်လိုက် သည်.. ဘော်လီမရှိ လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပေါ်လာသော နို့သားဝင်းဝင်းလေးကိုဆုတ်နယ်ပေးလိုက်သည်..အင်း…ကိုရယ် နို့စို့ ပေးပါ.. မြမောင်နို့ကုန်းစို့ရင်း..ပါတိတ်ထမိန်ကိုဆွဲလှန်၍..အဖုတ်သားနုနုလေးထဲလက်ခလယ် သွင်းလိုက်လေသည်… …ခင် လေးမှာ မြမောင်ရဲ့ဆံပင်ကို ဆွဲကိုင်ထားပီး..ခေါင်းမော့ကာဖီးတက်နေသည်.. “ကို ရယ်..ရှင် တခါလိုးပီးကထည်းက.. ကျမ ဘယ် သူနဲ့မှ မခံခဲ့ပါဘူး..တနေ့ရှင်လာမယ်ဆိုတာသိလို့ စောင့်နေတာပါ..အားရပါးရလိုးပေးပါ..” ..”ခင်လေး..စုပ်ပေးနော်..”
သူမ ခုံပေါ်မှပြန်ဆင်း၍.မြမောင်ရဲ့ဘောင်းဘီကိုချွတ်ပေးသည်..ထောင်မတ်နေသောလီးက အကြောအပြိုင်းပြိုင်းနှင့် ရင်ဖိုစရာ ကောင်းလှသည်.. နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးနှင့်လီးထိပ်ကိုငုံလိုက်ပီး..လျှာလေးနဲ့ မွှေပွတ်လိုက်ရာ… “အား.. ကောင်းလိုက်တာ..” မြ မောင် ခါးကော့သွားလေသည်.. ရှည်လွန်းသော လီးဖြစ်၍ အကုန်မသွင်းနိုင်ပဲ တဝက်လောက်သာစုပ်ပေးနိုင်သည်.. လီး အောက်ခြေကျင်ကြောကို လျှာနဲ့အထက်အောက်ပွတ်ဆွဲပီး လဥကိုစုပ်လေတော့သည်… လဥစုပ်နေစဉ် လွတ်နေသောလီးကိုဂွင်း ထုပေးပြန်သောအခါ မြမောင်မခံနိုင်ပါ သုတ်များပန်းထွက်ပါတော့သည်… ..”ဟာ ကျမ မခံရသေးဘူးလေ. “ “မပူနဲ့ခင်လေး ကျုပ်လီးက မကျဘူး.. ကုန်ပေးစမ်းပါ”. .ထမီချွတ်ချပီး ခုံဇောင်းမှာ ခင်လေး ခါလေးကော့ကုန်းလိုက်သည်..
ဆံပင် ရှည်များကို မြမောင်ဖြေချလိုက်ပီး စုကိုင်ကာ.. ခပ်စီးစီး အဖုတ်ထဲ လီးထိုးထဲ့လေသည်.. မြင်းလိုးသည့်ပုံစံဖြစ်သည်.. တင်သားနှင့် ဆီးခုံရိုက်ချက်နှင့်လိုးသံများထွက်လာတော့သည်…ဇိ..ဇိ.ဇိ..ဖတ်..ဖတ်.. “အား..တဆုံးထဲ့လိုး..ကောင်းတယ်. အား….”ခင်လေးအော်ဟစ် နေရင်း သေးများပင် ထွက်ကြတော့သည်.. သူမ တကိုယ်လုံးတဆတ်ဆတ်တုန်ခါနေသည်. မြမောင် လီးကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပီး ဖက်သားဖွေးဖွေးကြီးကို ဆွဲဖြဲလိုက်၏.. ခရေပွင့်အလား စူနေသော စအိုလေးကို မြင်တော့လိုးချင် စိတ်ပေါက်လာသည်.. ..မြမောင်မှာ အင်္ဂလန်အလည်သွားစဉ်က ဖင်လိုးသော ပုံများမြင်ဖူးသည်.. “ခင်လေး ဖင်ပေါက်က လှ လိုက်တာလိုးချင်တယ်”. . “ရှင်ကြီး သဘောပါ ရပ့မလားရှင်.. အရမ်းသေးတယ်”. . မြမောင်လီးထောက်ကြည့်ရာ စအိုဝပျောက် သွားသည်..သွင်းလို့မရ.. “ခင်လေး ဘာဆီရှိလဲ”. . “မုန့်ညှင်းဆီတော့ရှိတယ်..ယူပေးမယ်”. . ချစ်ဖို့ကောင်းသောခင်လေး ပါ..အခန်းထောင့်စင်ကလေးမှ မုန့်ညှင်းဆီဘူး ယူလာလေသည်..
မြမောင်ရဲ့လီးကို ဆီသုတ်ပေးပီး..ပြန်ကုန်းလိုက်သည်.. ထို့နောက် လီးကို စအိုဝတွေ၍ သွင်းလိုက်ရာ..ချောကနဲဝင်သွားတော့င ည်..အား…အီး..နာတယ်…. ခင်လေး ထအော်လေတော့သည်.. “ဖင်က ပိုလိုးကောင်တယ်ဟ..ငြိမ်ခံပေတော့..” ..ဗြိ.. ဘွတ်..ဘွတ်..ဘွတ်..အတွင်းလေများကန်ထွက်၏..ထိုအသံများက ကာမစိတ်ပိုမိုထန်စေလေသည်.. “ကောင်းလာပီကိုရေ မရပ်နဲ့ လိုးလိုး..အ့” ..ခုံက တဖြည်းဖြည်းပိုနဲ့လာ၍..ကျိုးမှာစိုးရသည်… ထိုကြောင့် ကြမ်းပြင်ပေါ် ရွှေ့လိုက်ပီး.. မုဆိုးဒူးထောက်ဆက် လိုးတော့သည်… ကွမ်းတရာညက်ခန့်အကြာ.. မြမောင့် သုတ်ရည်များ ဖင်ထဲပန်းထည့်လေတော့သည်… “ဟူး…ကောင်းလိုက် တာ”. . ခင်လေးမြမောင်ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖက်ထားပီး… “ကျမ အကို အမှုပီးရင်..ကျမဆီလာခဲ့ပါနော်”. . ..အင်းပါ ကွာ…….. ..နောက်တချီလောက်ထပ်လိုးကြပီး.. မြမောင် တာမွေဂါတ်ဆီသို့ပြန်လာခဲ့သည်..
မင်းကြီး ဆမြူရယ် အလွန်ပျော်ရွှင်နေသည်.. “လူကလေးမြမောင် အရမ်းတော်တယ်.” … “ဟို သတောင်းစား စိန်ဝင်းဖမ်းထား တဲ့ မဲကြီးကို ခုလွှတ်ပေးလိုက်ပါမင်းကြီး.. သူ့မိန်းမစောင့်နေတယ်”.. ..ဆားပုလင်းမြမောင်ပဲလေ..တော်မှာပေါ့. “လူကလေး ဒီ ညအားရင် ကျုပ်အိမ်လာခဲ့ပါ ညစာနဲ့ဂုဏ်ပြုချင်လို့ပါ…” “ကျုပ်မှာ တုတ်ကြီးရဲ့ အမှုမှတ်တမ်းရေးရအူးမယ်.ပီးရင်လာခဲ့မယ်..” မြမောင် ထိုသို့ပြောပီး စီးကရက်တလိပ်ဖွာရှိုက်၍.. တုတ်ကြီးကို ဖမ်းထားသော အချုပ်ခန်းဆီ ထွက်လာခဲ့လေသည်… …
”ကဲ..ကိုတုတ်ကြီးရေ..ခများရဲ့အမှုမှတ်တမ်းတင်ရအောင်..ပြောပေတော့”. . ..စီးကရက်တလိပ်ကို တုတ်ကြီးပါးစပ်မှာတတ်လိုက် ပီးမီးညှိပေးလိုက်သည် “အဖြစ်က ဒီလိုဗျ” ဆာပုလင်းမြမောင်တယောက် တုတ်ကြီးရဲ့ဝန်ခံထွက်ဆိုမှုများကို. မှတ်တမ်းတင် ပြုစုပြီး..မင်းကြီးဆမြုရယ်အိမ်သို့ ညစာစားရန်သွားလေတော့သည်.. အရာရှိကြီးဖြစ်၍ အိမ်မှာလွန်စွာကြမားခန့်ထည်လှပေ သည် ခြံစောင့်ကုလားမှတခါးဖွင့်ပေး၍ အိမ်တွင်းဝင်ရလေသည် ထမင်းစားပွဲမှာတော်တော်ရှည်လေသည် ဆယ်ပေပက်လည် လောက်ရှိသည် စားပွဲပေါ်တွင် သစ်သီးများဝိုင်များနှင့် အသားကင်များတင်ထားလေသည် “ဟာ လူကလေးမြမောင် လာဟေ့ ကျုပ်စောင့်နေတာကြာလှပီ” မြမောင်မှာ မင်းကြီးမျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ ထိုင်လိုက်သည်
“ဂွတ် ညနေ မင်းကြီး ကျုပ်နောက်ကျလို့ ခွင့်လွှတ်ပါ” မင်းကြီး ဝိုင်များအလွန် သောက်ထားပုံရသည် မူးနေလေသည် ထိုစဉ် အမျိုးသမီးတယောက် စားပွဲဘေး အလည်ခုံမှာ ဝင်လာထိုင်လေသည် “လူကလေးရေ ဒါက ကျုပ်မိန်းမပဲ မနေ့ကမှရောက်လာ တာ စင်သီယာလို့ခေါ်တယ်” မြမောင် ထရပ်၍ “ကျုပ်က မြမောင်ပါ စင်သီယာ” ဟုဆိုပီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်သည် ဆံပင် အိုမီဂါကေနှင့်ဂါဝန်ဖြူပါးပါး ဝတ်ထားသဖြင့် စင်သီယာ၏ကိုယ်လုံးကို မြင်နေရလေသည် အင်္ဂလန်သူ ဖြူချောကြီးဖြစ်သည် “ရှင်က အင်္ဂလိပ်စကား တော်တော်ကျွမ်းကျင်တာပဲ” ဟု စင်သီယာက ချီးကျူးလေသည် မင်းကြီးမှာမူးနေ၍ စကား ကောင်းကောင်း မပြောနိုင်တော့ပါ စင်သီယာလည်းအနည်းငယ်သောက်ထား၍မူးနေလေပီ တနာရီလောက်အကြာမှာ စင်သီယာ က “မင်းကြီးကိုအိပ်ခန်းထဲပို့ရမယ်ကူညီပေးပါ”
“Okပါ စင်သီယာ” မင်းကြီးကိုတယောက်တဖက်ဆီ မလိုက်ကြသည် စင်သီယာကုန်းမလိုက်ရာ ရင်သားများမြင်ရလေသည် ဖြူဖြူ အိအိကြီးများပင် ဂါဝင်အောက်မှ အတွင်းခံအနက်လေးမှာ ကြိုးသိုင်းအတွင်ခံဖြစ်၍ တင်သားများကို အရှင်းကြီးမြင်ရလေသည် လိုးသည့်အခါမှာချွတ်စရာမလိုပဲ အလည်ကြိုးလေးကိုဖယ်လိုက်ရုံနှင့် တန်းလိုးလို့ရပေသည် အိပ်ခန်းကုတင်မှာ အကြီးကြီး ဖြစ်သည် လူလေးယောက်လောက်အိပ်လို့ရနိုင်သည် မင်းကြီးကို ကုတင်ပေါ်တင်ပေးပြီနောက် စင်သီယာက “မြမောင် မင်း သောက်ချင်သေးလား” “သောက်မယ်လေ ကျုပ်က နည်းနည်းနဲ့မဝဘူး” ဟုပြောပီး စင်သီယာ၏နို့ကို ကြည့်နေမိသည် မင်းကြီး အသက်မှာ၅၀ ကျော်လေပီ စင်သီယာက ခုမှ ၃၀ကျော်ရှိသေးသည်
“စင်သီယာကျုပ်မူးသွားရင် ဘာလိုလုပ်မလဲ” “ဒီမှာအိပ်လေ မနက်မှပြန်ပေါ့” “Ok အာ့ဆို အမူးသောက်မယ်” သူတို့နှစ်ဦး ရောက်တတ်ရာရာ စကားပြောရင်းသောက်ရင်းနှင့် စင်သီယာမူးပါတော့သည် “ကျမသွားအိပ်တော့မယ်ရှင်သောက်လို့ ပြီးရင် အဆင်ပြေသလိုအိပ်လိုက်ပါ ဂွတ်နိုက်” သူမ ထလိုက်ရာမူးလဲသဖြင့် မြင့်မောင်က ချိုင်းအောက်ကမ၍ အိပ်ခန်းထည်းထဲ့စဉ် နို့ ကြီးနှစ်လုံးကိုကိုင်မိ၍ လီးမှာထောင်ထလာလေသည် စင်သီယာကိုကုတင်ပေါ်တင်ပေးလိုက်သည် ထို့နောက် အခန်းပြင် ထွက်ဟန် ပြပီး အခန်းတခါးကိုအသာလေးစေ့ကာ ချောင်းနေလိုက်လေသည်
သိပ်မကြာပါ သူမ မင်းကြီးဘက်လှည့်၍ ဘေးစောင်းအိပ်လိုက်ပီး ဂါဝင်ကို တင်သားများပေါ်အောင်ဆွဲတင်၍ ပေါင်လုံးကြီးကို ကုတ်နေလေသည် ညမီးက မှိန်မှိန်လေးထွန်းထားသော်လည်း အသားဖြူလွန်း၍ တင်အဖွေးသာကြီးကို မြင်ရလေသည် ဒီညရ အောင်လိုးမည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်သည် စင်သီယာ မအိပ်သေး မူးချင်ယောင်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည် မြမောင်၏အကြည့်များမှာမရိုး ပေ တဏှာမျက်လုံးများနှင့် သူမကိုကြည့်နေတာသိသည် မင်းကြီးမှာအသက်ကြီး၍ မလိုးနိုင်တာကြာလေပီ မြမောင် ချောင်းနေ တာ သိသည် ခြေသံကတံခါးနားမှာ ရပ်သွားပီး တံခါးပိတ်သံလဲမကြား၍ဖြစ်သည် ထို့ကြောင့် တဖက်လှည့်၍ ပေါင်ယားသလိုလုပ် ကာ ဂါဝန်ကို လှန်ထားလိုက်သည် ကိုမြမောင် ဝင်မလာ၍ စိတ်မရှည်တော့ တင်ကိုပိုကော့လိုက်ပီး ဂါဝန်ကို နို့ပေါ်အောင်ထပ်လှန် လိုက်လေသည်
မြမောင်စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ လီးမှာလည်း အရည်တွေထွက်နေလေပီ ထို့ကြောင့် ကုတင်နားကပ်သွားလိုက်သည်.. ဘေးစောင်း ကာကောက်နေသောဖင်ကြောင့် လိုးရန် အဆင်ပြေလေပီ ကုတင်ပေါ်ဖြေးဖြေးတက်လိုက်ပီးတင်သားကြားညပ်နေသော အတွင်းခံဘောင်းဘီ ကြိုးလေးကို ဖယ်လိုက်ရာ ပန်းရောင်စအိုဝနှင့် အရည်လဲ့နေသော အဖုတ်ရဲရဲလေးကိုတွေ့ရလေသည် စင်သီ ယာကို အသာလေး တွန်းမှောက်ကြည့်လိုက်၏ အလိုက်သင့်လေး မှောက်သွားလေသည် ဘောင်းဘီချွတ်ကာပေါင်ပေါ်ခွလိုက်ပီး လီးဒစ်နှင့် အဖုတ်ဝကိုပွတ်လိုက်ရာ ဖင်လုံးလေးကော့တက်လာတော့သည် လီးကိုဖြေးဖြေး တဆုံးထိသွင်းလိုက် ထုတ်လိုက်လိုး နေလိုက်၏ အရမ်းကြမ်းလို့မဖြစ်ပေ ဘေးမှာအိပ်နေသော မင်းကြီးနိုးသွားလျင် ပြသနာကြီးပေမည်
အဖြူမအဖုတ်မှာ အိစက်ညက်ညောလွန်းသည် စင်သီယာတချက်ငြီးလိုက်ပီး ဒူးထောက်ဖင်ကုန်းပေးတော့သည် မျက်နာကို ခေါင်းအုံးနှင့်အပ်ထားပြီး ပါးစပ်ကို သူ့လက်နှင့်သူ ပြန်ပိတ်ထားလေသည် သူမ မအိပ်ဘူးဆိုတာ မြမောင်သိ၍ ပျော်သွားလေသည် ထို့ကြောင့်မတ်တပ်အပေါ်မှရပ်၍ တင်သားနှစ်ခုကိုထိန်းကိုင်ကာ အပေါ်ဘက်မှ စိုက်လိုးပါတော့သည် အ့ “ရှူး စင်သီယာ ကုတင် ပေါ်က ဆင်းရအောင်” လိုးသံများထွက်မှာစိုး၍ဖြစ်သည် ကြမ်းမှာကတီပါခင်းထား၍ သူမ လှဲချလိုက်သည် သူမအသံမထွက် အောင် နှုတ်ခမ်းချင်းတေ့၍ပိတ်ထားလိုက်ပီး စောင့်စောင့်လိုးပါတော့သည် အူး..အွင်း အဖြူမအသားမှာ တကယ်စားကောင်းသည် စာရေးသူ နိုင်ငံခြားထွက်စဉ်က စားဖူး၍ဖြစ်သည် မြမောင်လီး ကြီးရှည်ကြောင့် သူမကြာကြာမခံနိုင်ပါ
အရေထွက်၍ပီးသွားလေသည် မြမောင်ဆက်မလိုးတော့ပဲ လီးကို သူမပါးစပ်ထဲထိုးထဲ့ရာ သူမအထာသိလေသည် အလိုက်သင့် လေးစုပ်ပေးသဖြင့် သုတ်များ ထွက်ကုန်တော့သည် စင်သီယာကအရေများကိုမြိုချပီးနောက် “မြမောင် ပြန်တော့နော် နောက်နေ့ ထပ်တွေ့မယ် မင်းကြီးနိုးလာမှာစိုးလို့” “Okပါ ကျုပ်ပြန်တော့မယ်” နောက်တနေ့မနက် မြမောင်သည် တုတ်ကြီး၏ဝန်ခံချက်များ ကို ပြန်လည်ဖတ်ရှုစီစစ်နေသည် ဝန်ခံသက်သေချက်များမှာ လွန်စွာရှည်လျှားလွန်း၍စာရေးသူ အကျဉ်းချုံ့လိုက်သည် ရေနံ ချောင်းမြို့တွင်းတနေရာ လူကုန်ထန်သေဋ္ဌးများနေသောရပ်ကွက်တွင် မောင်မောင်တုတ်နှင့်ခင်ခင်လေးတို့ မိသားစုနေထိုင်ကြ သည် ရတနာကုန်သည်များဖြစ်ကြ၍ လွန်စွာချမ်းသာကြသည် …မြမြနှင့်ဘရွှေဆိုသောအသက်၂၀အရွယ်မောင်နှမနှစ်ဦးမှာထိုအိမ် တွင်အလုပ်လုပ်ကြသည်..
တနေ့တွင်သူတို့နှစ်ဦးမှာအိမ်ရှင်တွေကိုလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်၍ရတနာများကိုခိုးယူကာထွက်ပြေးသွားကြသည်.. …မောင်တုတ်နှင့် ခင်လေးတို့မှာမိဘမဲ့များဖြစ်သွားကြလေသည်..ထိုကြောင့်ဆန်စက်သေဋ္ဌးဦဘကလေးမှခင်လေးတို့အားခေါ်ယူမွေးစားကာ ကြီးပြင်းစေခဲ့လေသည်.. …အရွယ်ရောက်လာသောမောင်နှမနှစ်ယောက်ရန်သူများအားလက်စားချေရန် စီစဉ်ကြလေသည်… … မောင်တုတ်သည်ပညာမတတ်ပေ..သူဝါသနာပါသောကျောက်သွေးသည်အလုပ်လုပ်ရင်းရန်သူများကိုရှာဖွေလေသည်.. …တ ယောက်ထဲရှာဖွေရတာအစဉ်မပြေ၍ လူမိုက်များကိုငွေပေးကာခိုင်းစေလေသည်..နှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာလူမိုက်ခေါင်းဆောင် တုတ်ကြီးဖြစ်လာလေသည်.. …လူမိုက်ဖြစ်သွား၍ရတနာကျောက်သွေးအလုပ်ကအဆင်မပြေတော့..ထို့ကြောင့် ဂေါ်လီသွေး လေသည်..ဂေါ်လီများမှာလက်ရာမြောက်လှသဖြင့်တဏှာရူးနှာဘူးများကလာရောက်ဝယ်ကြထည့်ကြလေသည်…
…သူကိုယ်တိုင်လည်း လီးပတ်လည်မှာ အရှေ့ငါးလုံးအနောက်ငါးလုံးကွင်းလိုက်ထည့်ပီးကြေငြာပြသဖြင့်..ဆယ်ဂေါ်လီတုတ်ကြီး ဟုအမည်တွင်ခဲ့လေသည်… …တနေ့တွင်ရန်သူတော်ဘရွှေတာမွေတွင်နေထိုင်သည်ဟုသိလိုက်ရသည်.. …ထိုအရပ်သည်ဆား ပုလင်းမြမောင်၏အပိုင်ဖြစ်၍အရမ်းမလုပ်ရဲပေ.. ထို့ကြောင့်ခင်ခင်လေးကိုအကြောင်းကြား၍မြမောင်နှင့်လိုးပွဲဆင်နွှဲချိန်ဘရွှေကို သတ်ရန်စီစဉ်ကြလေသည်.. ..(ထိုဇာတ်လမ်းကိုအပိုင်း၁တွင်တင်ပြပီးဖြစ်သည်). .#ရွှေကြာမောင်.. …မြမောင်နှင့်ခင်လေး လိုး ရည်လူးနေချိန် ဘရွှေကိုသတ်ကာမောင်တုတ်ပုန်းရှောင်နေလိုက်သည်.. ..ဒေါ်မြမြအလှည့်ကျန်လေသည်.ဒေါ်မြမှာခိုးယူသွား သောရတနာများကိုဘရွှေနှင့်တဝက်စီခွဲယူ၍ရတနာကုန်သည်အဖြစ်တဦးထည်းနေလေသည်.အိမ်ထောင်မပြုပေ ..ဒေါ်မြသည် တဏှာကြီးသောမိန်းမတဦးဖြစ်သည်.တပါတ်တခါယောက်ျားဖာများ ကိုခေါ်ယူ၍အလိုးခံကာကာမစိတ်ဖြေဖျောက်လေသည်.. …တုတ်ကြီးသိလိုက်ရသည်..ထို့ကြောင့် ရန်ကုန်ရှိနာမည်ကြီးစကော့ဈေးနှင့်ပန်းဆိုးတန်းအရပ်မှဖာတန်းများမှာ မမများအတွက် လိုးပေးသူဟုအမည်မှဲ့ကာ..ကြေငြာလေသည်..
..သိပ်မကြာပါဒေါ်မြအငှါးလင်လာရှာလေသည်..တုတ်ကြီးဒေါ်မြနှင့်တွေ့လေပီ… “မမ..ကျနော်ကစိတ်တိုင်းကျစေရမယ် နော်..ငွေကြေးက မမသဘောပါ”. . ဒေါ်မြ မှာ အရပ်မြင့်မြင့်နှင့်ရုပ်ချောသော ကောင်လေးကို စားချင်သွားသည်.. ထို့ကြောင့်… “မောင်လေးက..ကြာကြာလုပ်နိုင်ပ့မလား မတ်မတ်က တက်ထွက်မကြိုက်ဘူးနော် အနည်းဆုံး မိနစ်၃၀မှကြေနပ်တာ”. .. “ကြာစေရမယ် မမ..စိတ်တိုင်းမကျရင်.. မမစီးတဲ့ဖိနပ်နဲ့ မောင်လေးကိုရိုက်ပါနော် ..” မျက်နှာငယ်လေးနှင့်ပြောဆိုနေသောကြောင့်..ဒေါ်မြ အသည်းခိုက်ကြွေဆင်းလေပီ.. ..ထို့နောက် အိမ်လိပ်စာရေးပေးလိုက်ပီး.. “နက်ဖြန်ည၉နာရီလာခဲ့မတ်မတ် စောင့်နေမယ်..ခြံတခါးဖွင့်ပေးထားမယ်.ဝင်လာခဲ့” …နောက်နေ့ည..ဒေါ်မြအလိုးခံဖို့ပြင်ဆင်နေလေသည်..၉..နာရီမထိုးခင်ထည်း က.. မောင်တုတ်မှာအိမ်ထည်းရောက်နှင့်နေလေပီ…နောက်ဖေးခြံစည်းရိုးကျော်ဝင်ခြင်းဖြစ်သည်..
…အိမ်နေါက်အခန်းတခုတွင်အိမ်ဖော်မနှင့် ဒရိုက်ဘာတို့လိုးနေတာမြင်လိုက်ရသည်.. (ဖြူတုတ်နှင့်မဲကြီးဖြစ်သည်..အပိုင်း၂တွင် ဖတ်ရှုနိုင်သည်). . ..အိမ်အတွင်းတနေရာတွင်ပုန်းနေလိုက်သည်..၉..နာရီမှာဒေါ်မြသည်အပေါ်ထပ်မှဆင်းလာ၍..ခြံတံခါးသွားဖွင့် လေသည်.. ..ဒေါ်မြ ဂါဝန်အပါးဝတ်ထားသောကြောင့် နို့ကြီးနှင့်ဖင်ကြီးများမှာမြတ်ကေသီအောင်လို ကြည့်ကောင်းလှသည်.. ..အပေါ်ပြန်တတ်သွားသော ဒေါ်မြနောက်တိတ်တိတ်လေးလိုက်၍.. “ဟိတ်..မမ..” “အမလေး”. . “မောင်လေး..မမလန့်လိုက် ထှာ..ဝင်လာတာမကြားရဘူးနော်..သူသိပ်တော်တာပဲ” …ဒေါ်မြ၏နို့ကြီးနှစ်လုံးကိုအားရပါးရဆုတ်ကိုင်လိုက်ပီး.. “အိမ်မှာဘသူ တွေရှိသေးလဲမမ..တော်ကြာသူများဒေ ကြားရင် ရှက်စရာကြီး” .”အိမ်ဖော်လင်မယားပဲရှိတယ်.ခနစောင့်တခုခုဝယ်ခိုင်းလိုက်မယ် အာ့မှ အလွတ်ကဲလို့ရမှာ..ခ်..ခ်..”
..ဒေါ်မြအူမြူးနေသည်အသတ်ခံရမှာမသိခဲ့ပေ..အခန်းပြင်ထွက်သွားလိုက်ပီး. “ဟဲ့..မဲကြီးရေမဲကြီး..ဒန်ပေါက်သွားဝယ်စမ်းငါ ဗိုက်ဆာလို့”.ဟုအော်ပြောလိုက်လေသည်.. ..ထိုအခါအောက်ထပ်မှ “ဟုတ် မမကြီး” ဟု အသံကြားပီးနောက်..ဒေါ်မြ ပြုံးပြီးပြန် ဝင်လာလေသည်… ..”မမရေစရအောင်မောင်လေးထန်နေပီ.” ..တုတ်ကြီးရဲ့လီးနေရာကိုဒေါ်မြလက်ခလေးနဲ့ အသာအုပ်ကိုင်ပီး နောက်… “မောင်လေးဟာ အရင်ပြကွာ ကိုင်ချင်တယ်..” မောင်တုတ်ဘောင်းဘီရှည်ကိုချွတ်ချလိုက်ရာ…ဂေါ်လီစကြာ နှင့်၈လက်မလီးကြီးက မတ်ထောင်လာတော့သည်.. ..”ဟင်..ဒါဘာတွေလဲ..ကြောက်စရာကြီး ဒါ..ဒါနဲ့ မမကိုလိုးရင် နာမှာပေါ့”. . ဒေါ်မြလန့်သွားပီးစကားများပင်ထစ်နေတော့သည်… ..”မကြောက်နဲ့မမ စမ်းကြည့်လိုက် အရမ်းကောင်းတာ မမသိစေရမယ်..” ဒေါ်မြကိုဆွဲဖက်၍ ကစ်ဆင်ဆွဲကာ.. စောက်ဖုတ်ကလိပေးလိုက်သဖြင့်… ငြိမ်ကျသွားလေသည်..ထိုနောက် ကုတင် စောင်းမှာ လှဲချလိုက်ရာ ကိုယ်လုံးမှာ ကုတင်ပေါ်ပက်လက်ဖြစ်ပြီး ခြေထောက်မှာအောက်တွဲလောင်းဖြစ်နေသည်…ခြေထောက်ကို ဖြဲကားလိုက်ပီး.. ပြဲအာနေသောအဖုတ်တွင်းလီးကို တေ့ကာ..ဒေါ်မြလက်နှစ်ဖက်ကိုချုပ်ထားလိုက်သည်….
..ဒေါ်မြလှုပ်လိုမရတော့..လီးကိုအားကုန်စောင့်လိုးထည့်တော့သည်… ဗြစ် ဒုတ် အား..အား..အူး…အော်သံမထွက်အောင်ပါးစပ် ကိုဖိပိတ်လိုက်ပီး..ထပ်ဆောင့်သည် လီးကကြီးသလို ဂေါလီများကြောင့်အဖုတ်မှာ ပြဲကွဲကာသွေးများထွက်လာတော့သည်.. “ဒေါ်မြ..ခများ မှတ်မိလား ကျုပ်က မောင်မောင်တုတ်လေခဗျားတို့ကျုပ်မိဘတွေကိုသတ်ပီးပြေးသွားတာ..ခုပြန်ပေးဆပ်ရမယ်”. . ဒေါ်မြလန့်ဖြန့်သွားပီးရုန်းကန်လေတော့သည် မရပါ..ဆွဲမှောက်၍ စအိုကိုထပ်လိုးသဖြင့်သွေးထွက်ပြန်လေသည်. “ငါ တောင်းပန်ပါတယ်ဗီဒိုထဲမှာစိန်တွေရှိတယ်ပြန်ယူသွားပါနော်”. . “မယူဘူး ခများသေရမယ်”ဟုဆိုကာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းထပ် ဆောင့်လိုက်၏.. .ဒေါ်မြအားကုန်သုံးအော်သဖြင့် ဂုတ်ကိုအိပ်ဆောင်ဓားဖြင့်ထိုးလိုက်ရာ..
သေလေသည်….ထိုနောက် ဒေါ်မြ ဗီဒိုမှစိန်များကိုယူ၍ကြမ်းပေါ်ကြဲချလိုက်ပီး..ဘောင်းဘီအတွင်းမှ..သူ၏လက်ရာမြောက် ဂေါ်လီလေးကိုထုတ်ယူကာ စိန်များနှင့် ရောထားလိုက်လေသည်.. “ဆားပုလင်းမြမောင်ရေ.ခများမျက်စိလျှင်ရင် ကျုပ်ကိုလာရှာ ပါ”. .. ဟုပါးစပ်မှရွတ်နေစဉ်..အောက်ထပ်မှလူတက်လာသံကြား၍…ပြတင်းမှခုံဆင်းထွက်ပြေးလေတော့သည်… ..အပိုင်းများ ကို အစဉ်လိုက်ဖက်ရှုလျင်. သင်သိပါလိမ့်မည်… …..ပြီးပါပြီ။… ….ကျေးဇူးတင်ပါသည်…
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ဆားပုလငျးမွမောငျနှငျ့ဆယျဂျေါလီတုတျကွီး